From inside Burma plans for new uprising against military
link တွင်ကြည့်ပါ http://video.google.com/videoplay?docid=2500803962065231006
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/06/20080အကြံပြုခြင်း
8.8.08 program in Canada(Come join us)
-August 8,2008 မနက်၁၁နာရီအရောက်Assemble at Queen’s Park, Toronto သို့စုရုံးရောက်ရှိရန်
-၁၂နာရီခွဲတွင် တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး သို့စုပေါင်းချီတက်ရန်
Media Contact: 416-358-2318
August 8th marks the 20th anniversary of Burma's largest democratic uprising. Millions of civilians and Buddhist monks, led by university students, took to the streets to demand an end to oppressive military rule. The uprising ended with the massacre of thousands of peaceful protestors. Nobel Peace Prize winner, currently living under house arrest in Burma, Aung San Suu Kyi emerged asanational democratic leader and international icon inastruggle for democracy that continues today.
This day also marks the opening of the Beijing Olympics. China has long been the number one supporter of the Burmese junta.
Burmese democratic movements and supporters around the world will commemorate this historic day. In Toronto, Burmese Democratic Forces in Canada will be holdingaPress Conference. The Honourable Larry Bagnell MP, Chair of Parliamentary Friends of Burma and Dr. Brain John, Myanmar Coordinator Amnesty International Canada will be in attendance.
Activities in Toronto are planned in coordination with the Tibetan community and the China Rights Network to honour those who have struggled for human rights in Burma, Tibet and China.
11:00am: Assemble at Queen’s Park, main south entrance
China Rights Network Press Conference and Medal Ceremony
Speakers will include representatives from World Federalists of Canada, China Rights Network, Tibetan Community & Burmese Democratic Forces
Note: There will beaseparate Press Release from the China Rights Network.
12:00pm: Burmese Democratic Forces Press Conference at Queen’s Park
Speakers will include Chairman of the Parliamentary Friends of Burma, Myanmar Coordinator Amnesty International and Burmese Democratic Forces in Canada
12:30pm: March to the Chinese Consulate, 240 St. George Street, Toronto
1:00pm: Activities in front of the Chinese Consulate
Dramatization of 8888 uprising
Zaw Wai Kyaw: 416.358.2318, zaw.w.kyaw@gmail.com
Dear Friends of Burma:)Ottawa
Aug. 8, 2008 is the 20th Anniversary of Burmese Democratic Uprising. In order to commemorate this important occasion, the Canadian Friends of Burma is planningaseries of events and demonstration on Aug.7 and 8, 2008.
Burmese activists and Burma supporters will join inademonstration to be held in front of the Chinese Embassy in Ottawa on Aug.7 at noon. The Canadian Friends of Burma is working with Canada-Tibetan Committee and other organizations to coordinate this action. Please join with us at the Chinese Embassy on Aug.7at noon.
On Aug. 8, the Canadian Friends of Burma will hold both outdoor and indoor events in Ottawa. The first event will start at 5pm on Aug. 8 at the Human Rights Monument. We will have some live music and speeches, along with colourful banners, posters and flags (fighting peacocks, the symbol of Burmese democratic movement and Tibetan flags).
At 7pm, we will hold an official commemoration in the Ottawa City Council Chamber, with speeches, slideshow and video documentary on 8888 uprising. “Olympic Games: Burma in Chain” video presentation will be also screened.
The Canadian Friend of Burma is also in the process of producingamusic album entitled “Burma Hands off” and will be available during the 20th Anniversary of this uprising.
The most exciting part of all would be the proclamation of “Burma Day” by Ottawa City on Aug. 8. We are working on it and hoping that the Ottawa City Mayor will proclaim it.
Therefore, I earnestly invite you to join in the following events:
1) Aug.7 demo at Chinese Embassy,
2) Aug. 8 at noon, outdoor event at Human Rights Monument, and
3) Aug.8 indoor event at the Ottawa City Hall.
Please don’t forget to confirm your attendance.
8888 Organizing Committee
The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.or
Rights groups to gather at Chinese Embassy on eve of Olympics
OTTAWA -- A coalition of human rights groups from Toronto, Montreal and Ottawa will rally at the Chinese embassy on August 7, hours before the opening ceremonies of the Beijing summer Olympics. The Human Dignity Event will draw attention to China's failure to meet important human rights commitments it made when it bid to host the 2008 games.
International human rights activist and former Miss World Canada Nazanin Afshin-Jam isafeatured speaker.
What: Human Dignity Rally
When: Thursday, August 7, 2008 12:00 noon - 1:00 pm
Where: Embassy of the People's Republic of China, 515 St. Patrick St.
Nazanin Afshin-Jam (international human rights activist, former Miss World Canada)
Committee to Investigate the Persecution of Falun Gong
Hon. Irwin Cotler, M.P.
Darfurian Community of Ottawa
Former Secretary of State for the Asia-Pacific David Kilgour
Thubten Samdup (Founding President of the Canada Tibet Committee)
South Sudan-Canada Association
Vietnamese Federation of Canada
For more information: Dermod Travis (Canada Tibet Committee) at 514.487.0665, or Tin Maung Htoo (Canadian Friends of Burma) at 613-297-6835
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ အခက်အခဲ
ကိုဝိုင်း/ ၆ သြဂုတ် ၂၀၀၈
မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျင်းပမည့် အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုနိုင်ရန် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်လုံခြုံရေး တင်းကျပ်လိုက်မှုကြောင့် ဒေသတွင်းရှိ မြန်မာနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားများ အခက်တွေ့နေရသည်။
မြန်မာဘက်ကမ်း မူဆယ်မြို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော တရုတ်ဘက်ကမ်းရှိ ကျယ်ဂေါင်နှင့် ရွှေလီမြို့ များမှ အ၀င်အထွက် ဂိတ်စစ်ဆေးမှုများကို ယခင်ကနှင့် မတူပဲ တင်းကျပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ စီးပွားလာရှာသူ မြန်မာဈေးသည်နှင့် အထမ်းသမားများ ပို၍ ထိခိုက်ရကြောင်း တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောက ပြောသည်။
၎င်းက “မြန်မာနိုင်ငံသားတွေချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်တွေလည်း ထိခိုက်ပါတယ်။ အထမ်းသမားတွေဆိုရင် ပိုခက်တယ်။ အဖမ်းခံရရင်လည်း နည်းတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်က တောင်းရင် ဗမာငွေ (၃-၄-၅) သောင်းတောင်းတာ။ တခါတလေကျရင်လည်း (၁) သိန်းလောက် တောင်းတယ်။ နဂိုကမှ စားစရာမရှိလို့ ဒီဘက်ကမ်း ပြေးလာပြီးတော့ အထမ်းလုပ်ရတဲ့လူက အဲဒီ လိုဖြစ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
အလားတူ တရုတ်ဘက်သို့ ခိုးပေါက်များမှတဆင့် နေ့ချင်းပြန် ကူးလာ၍ မုန့်မျိုးစုံရောင်းနေသည့် ဈေးသည်လေးများလည်း ဆီးကြိုဖမ်းဆီးခြင်း ခံနေကြရကြောင်း၊ မန်စီမြို့မှ မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ လည်း ဖမ်းခံရပြီး ရွှေလီသို့ အပို့ခံရကာ ပြန်လွတ်မြောက်ရန် တရုတ်ရဲများကို ငွေပေးကြရကြောင်း ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆက်ပြောသည်။
“ကျယ်ဂေါင်ဘက်ကျတော့ အခန်းခတွေက ဈေးကြီးတယ်။ ဗမာငွေနဲ့ဆို (၁) သောင်း (၂) သောင်း ပေးရတယ်။ အဲဒီတော့ မုန့်ဟင်းခါးတို့ ဘာတို့ လာရောင်းတဲ့ လူတွေလည်း ဟိုဘက်မှာနေပြီး ချက် ပြုတ်ပြီးတော့ မိုးလင်းတာနဲ့ ခြံစည်းရိုးကျော်ပြီး ခိုးပေါက်ကနေ ၀င်လာတာပဲ။ အဲဒီမှာ စောင့်ပြီး ဖမ်းတာ။ အဲဒီလိုပဲ အဖမ်းခံရတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ အဲဒီလောက်ထိ မကျပ်မတ်ဘူး။ ခုဟာက တော်တော့်ကို တင်းကျပ်တဲ့ သဘောမျိုးရှိတယ်။ ကူမင်းတက်ပြီး ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ ကုန်သည်တွေ မသွားနိုင် မလာနိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ (ရွှေလီ) နဲ့ ကီလို (၁၀၀) ကျော်ကျော်ဝေးတဲ့ မန်စီမြို့မှာရှိတဲ့ ကျောက်သွားပွတ်နေတဲ့ စက်ရုံက ဗမာအလုပ်သမားတွေ၊ ဗမာထမင်းဆိုင်တို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တို့မှာ သွားလုပ်နေတဲ့သူအားလုံးကို မနေ့က အကုန်လုံးကို ရွှေလီကို မောင်းချတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းသို့ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်စစ်ဆေးနေမှုကို မူဆယ်၊ ကျယ်ဂေါင်၊ ရွှေလီ၌သာမက ရွှေလီမှ ယူနန် ပြည်နယ်မြို့တော် ကူမင်းအထိ လမ်းတလျှောက် တင်းကျပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်လက ကူမင်း၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအပါအ၀င် အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်-တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ရှင်းကျန်းလူမျိုးစုများ၏ ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားနေမှု၊ တိဘက်လှုပ်ရှားမှုများ စသည့်ရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အဓိကထား ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရသူ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းက ယူဆသည်။
၎င်းက “စစ်နေတာက ရွှေလီနဲ့ ကူမင်းလမ်းတလျှောက်ပဲဗျ။ အဓိက စစ်တာက ရင်းကျန်း၊ လုံးလင်၊ မန်စီ သံလွင်မြစ်တံတား၊ သံလွင်မြစ်တံတားအကူးက အခရာပဲ။ ဒီဘက်ကလူတွေ အကုန်လုံးက အဲဒီတံတားကို မဖြတ်လို့ကို မရဘူး။ အိုလံပစ်အတွက် လုံခြုံရေးပဲ။ ကူမင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာကြည့်ရင် ယူနန်ပြည်ထဲမှာလည်း အန္တရာယ်ရှိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ယူနန်ဆိုတာက တိဘက်နဲ့လည်း ဆက်နေ တယ်။ အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်နယ်စပ် ရှင်းကျန်းတို့ ဝေခါတို့ အဲဒီဘက်တွေနဲ့လည်း ဆက်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ စိုးရိမ်တာ သဘာဝကျတယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
နယ်စပ်လက်နက်ကိုင် ရဲများက မိုင်းရှာဖွေရေး ကိရိယာများပါ အသုံးပြု စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး
နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် မရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ရှာဖွေဖမ်းဆီး၍ နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့မှုများရှိ ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများထဲမှ မွတ်စလင်ရုပ် ပေါက်သူများကို တိတိကျကျ စစ်ဆေးကြောင်း ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းက ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်ဘက် ရှင်းကျန်းပြည်နယ်အတွင်း၌ ခွဲထွက်လှုပ်ရှားမှုများသည် ပြီးခဲ့သည့်
(၂) နှစ်အတွင်း ပြင်းထန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်း၌ တရုတ်လက်နက်ကိုင်တပ်များက
ခွဲ ထွက်သူပုန်များကို တင်ကြိုချေမှုန်း တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိခဲ့ပြီး ခွဲထွက်သူပုန်များဘက်ကလည်း
လက်တုံ့ပြန်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ။
အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ဘာကြောင့် စစ်အစိုးရလက်မှတ်ထိုးရသလဲ
ပီတာအောင်/ ၆ သြဂုတ် ၂၀၀၈
အာဆီယံဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံတည်ငြိမ်စေရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်ရေးတို့ကို လေးစားလိုက်နာသည့် အစိုးရကောင်းတရပ် ဖြစ်စေရေးတို့ ဦးတည်ထားသည့် အာဆီယံ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို အာဏာသိမ်း မြန်မာစစ်အစိုးရက အလွယ်တကူ လက်မှတ်ထိုးခဲ့၏။
မည်သည့်အတွက် စစ်အစိုးရ အလွယ်တကူ လက်မှတ်ထိုးရသနည်းဆိုသည်ကို ဆန်းစစ် ကြည့်ဖို့လို၏။
လက်ရှိအချိန်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ (၂,၀၀၀) ခန့်ကို အကျဉ်းချုပ်၊ အကျယ်ချုပ်များချ၍ ဖမ်းဆီးထားသည်။ အရွယ်မရောက်သေး သည့် ကလေးသူငယ်များကို စစ်မှုထမ်းခိုင်းသည်။ အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုနှင့် နယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအပေါ် စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု သတင်းများက ကြိုးကြား ကြိုးကြား ထွက်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပြည်သူလူထုက တရားဝင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များရှိပါလျက်နှင့် အာဏာသိမ်းထားသည့် စစ်အစိုးရက အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းကို လက်မခံနိုင်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာသည့် နိုင်ငံဖြစ်လာအောင်လုပ်ရန်မှာ အာဆီယံ၏ တာဝန် ဖြစ်သည်ဟုလည်း အန်အယ်လ်ဒီက သတိပေးထားသည်။
ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အခြေခံအခွင့် အရေးများ လေးစားလိုက်နာရေး၊ နျူကလီးယားကင်းလွတ်ဇုန်ဖြစ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကွာဟ ချက်နည်းပါးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ပူးပေါင်းကာကွယ်ထိန်း သိမ်းရေး စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အာဆီယံပဋိညာဉ်ကို ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပဋိညာဉ်ကို သဘောတူ လက်ခံကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံက သတ္တမမြောက် နိုင်ငံအဖြစ် ဇူလိုင် (၂၁) ရက်တွင် နအဖ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်း အဝေးပွဲတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတို့ ကျန်ရှိနေသေးသဖြင့် အာဆီယံပဋိညာဉ် အသက်ဝင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်မပေးလျင် အာဆီယံပဋိညာဉ်စာတမ်းကို
အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးမည်မဟုတ်ဟု ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဒါဗို့စ်တွင်ကျင်းပ သည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၌ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယိုက ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိလေဟန် ပြသလိုသည့်အတွက် စစ်အစိုးရက ယခုကဲ့သို့ ဟန်ပြ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယူဆသူများ ရှိသကဲ့သို့ ပဋိညာဉ်ကို မလိုက်နာပါက မည်သို့အရေးယူမည် တိတိကျကျ မပါရှိသည့်အတွက် မြန်မာစစ် အစိုးရက လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်သူများလည်း ရှိသည်။
အာရှလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ရှေ့နေ ဦးမင်းလွင်က “အာဆီယံပဋိညာဉ်ထဲမှာ ပါတဲ့ဟာတွေ ကို မလိုက်နာရင် အရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုး ပဋိညာဉ်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတာ မရှိပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ပဲ မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်မှတ်ထိုးတာဖြစ်တယ်။ အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက် အတိအကျ ပါတယ်ဆိုရင် ထိုးချင်မှထိုးဦးမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်တွေ့အခြေအနေ၌ ပဋိညာဉ်ပါ လူ့အခွင့်အရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မြန်မာကဲ့သို့ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့်နိုင်ငံက လိုက်နာရန် မဆိုထားနှင့် ပဋိညာဉ်ကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီး ရေးဆွဲနေသည့် မလေးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် ထိုင်း စသည့်နိုင်ငံများသည်လည်း လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုများနှင့် မကင်းသေးကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြသူတို့ ရှိသည်။
ပဋိညာဉ် အသက်ဝင်လာပြီးနောက် အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတခု ပေါ်ပေါက်လာနိုင် ကြောင်း ဦးမင်းလွင်က ယူဆသည်။ ယင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်သွားမည်၊ အာဆီယံကလည်း မြန်မာကို အကာအကွယ် ပေးလေ့ ရှိသည့်အတိုင်း ဆက်လက် အကာအကွယ် ပေးသွားမည်ဆိုလျင် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်နိုင်ဘဲ ပို၍ ဘေးရောက်သွားနိုင်မည့်အရေး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်ဟုပါ အာရှလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ရှေ့နေ ဦးမင်းလွင်က ဆက်လက် ပြောဆို သွားသည်။ ။
စနေနေ့၊ သြဂုတ်လ 02 2008 12:55 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နာတာရှည် လူမမာတယောက် ဖြစ်ခဲ့ရ။
လည်ပတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်လို့။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ 06 2008 21:13 - မြန်မာစံတော်ချိန်
(ဆောင်းပါးရှင် ကိုစိုးထွန်းသည် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်း စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးမည့် အရေးမှ ပုန်းရှောင် လှုပ်ရှားနေသူ ဖြစ်သည်။)
ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းတဲ့ ပန်းတိုင်၊ ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းတဲ့ ခေတ်စနစ်တခုနဲ့ နီးလာပြီလား၊ ဝေးနေသေးလား ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည် လူထုကြီးရဲ့ စိတ်တွေဟာ အပြောင်းအလဲကို ဘယ်လောက် လိုလားသလဲ၊ အပြောင်းအလဲအတွက် ဘယ်လောက်တောင် တာဝန်ယူပြီးတော့ ဘယ်လို လူ့တာဝန် လူ့ဝတ္တရား လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လိုချင်မြတ်နိုးသလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်၊ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေဟာ လူသားတွေပီပီ လူစိတ်ရှိမှဖြစ်မှာပါ။ လူစိတ်ဆိုတာက အဓိကက လူရာဝင်ဖို့၊ လူစင်မီဖို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးတွေ သိမယ်၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ခံစားနိုင်မှ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ခံစားနိုင်ဖို့အတွက် လူ့တာဝန်၊ လူ့ဝတ္တရားတွေကို တာဝန်ယူဖို့အတွက် တာဝန်ယူရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ အများအကျိုးအတွက် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးအတွက် အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် စွန့်လွှတ်စွန့်စားလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိမှသာ လူစိတ်ရှိတဲ့ လူလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောက်တရားနဲ့ နေထိုင်ရတယ်ဆိုတာ လူမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အားလုံးကို ကြောက်နေရတယ်ဆိုတော့ကာ လူမဟုတ်တော့ဘူး။ ထားရာနေ စေရာသွားဆိုတဲ့ ဘဝတွေဟာလည်း ကျွန်ဘဝတွေနဲ့ ဘာမှ မခြားနားသလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်စိတ်မရှိဖို့ လိုတယ်။ ကျနော်တို့တွေဟာ ကြောက်လန့်နေရတယ်ဆိုတာ ကျွန်စိတ်ရှိနေရတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ရှိနေရတာ။
အခု ကျနော်တို့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ ကောင်းနေတာက ကျနော်တို့ လူမျိုးဟာ စားဝတ်နေရေးတွေနဲ့ အကုန် ရုန်းကန်နေကြရတယ်။ လူတွေဟာ မှန်၏၊ မှား၏ဆိုတာ မခွဲခြားနိုင်ကြတော့ဘူး။ မခွဲခြားဘဲနဲ့ ဖြစ်သလို ဘဝတွေနဲ့နေ၊ ဖြစ်သလိုဘဝတွေနဲ့ ရပ်တည်ပြီးတော့ စာရိတ္တတွေ ဖျက်ဆီးခံနေရတယ်။ ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေကို ဖျက်ဆီးခံရမှန်းမသိ ဖျက်ဆီးခံနေရတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေကို ဖျက်ဆီးခံနေရတာတွေကို ဖျက်ဆီးမခံဘဲနဲ့ လူသားပီပီ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိအောင် ကိုယ့်တာဝန်၊ ကိုယ့်ဝတ္တရားတွေကို ယူကြရမှာ ဖြစ်တယ်။
ရှစ်လေးလုံး အနှစ် ၂ဝ ပြည့် ရောက်လာတော့မယ့် အချိန်မှာ ကျနော်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ စကားတခွန်းကို မှတ်မှတ်ရရ သတိသွားရမိတယ်ဗျာ။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေဟာ တလွဲဆံပင်ကောင်း ကြတယ်ဗျာတဲ့။ ဗမာတွေဟာ ဗမာ ဗမာချင်း ချတဲ့နေရာမှာ အားသန်ကြတယ်။ ဒီစကားဟာ ကျနော်တို့ ဒီခေတ်မှာ နအဖ အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြရတယ်။
အခုဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းစွာ မိမိတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ မိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်ပြီးတော့ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတယ်။ ရယကတွေ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေကို အသုံးချပြီးတော့ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် နှိပ်ကွပ်ပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ လုပ်နေတယ်။
ဒီလို လုပ်နေပေမယ့် ရဟန်းသံဃာတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ပြည်သူတွေဟာ ငြိမ်ခံမနေကြဘူး၊ ငုံ့ခံမနေကြဘူး ဆိုတာ ရှစ်လေးလုံး နှစ် ၂ဝ ပြည့်ခါနီး အချိန်မှာ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးက အနီရောင် လှုပ်ရှားမှုတွေက ပြသနေပါတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ လူမဆန်တဲ့လူတွေရဲ့ ဘေးတွေကို အခု ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ နာဂစ်မှာလည်း ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကလူတွေ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က လူတွေဟာ တကယ့် ဒုက္ခသုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ အချိန်မှာ မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေကို အမြတ်ထုတ်နေတာတွေ၊ ပိုင်ရှင်မဲ့သွားတဲ့ လယ်တွေ၊ ပိုင်ရှင် ရောက်မလာသေးတဲ့ လယ်မြေတွေ၊ ယာမြေတွေ သိမ်းယူတာတွေ ကြားနေကြရတယ်။ ဒါတွေကလည်း မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့ အရာတွေပါ။
ကိုယ့်အမျိုးသားအချင်းချင်း ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့၊ ကိုယ့်အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို မဖော်ဆောင်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူတွေကို လူလို လူရာမသွင်းဘဲနဲ့ အခုလိုမျိုး ဖိနှိပ်နေတာဟာ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုအမျိုးသားအချင်းချင်း ဖိနှိပ်နေတာကို ကျနော်ဟာ သွားသတိရမိတာ တခုရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဗြိတိသျှအစိုးရ လက်ထက်က၊ ဗြိတိသျှ ထိပ်တန်းအရေးပိုင် တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ မောရစ်ကောလစ်ရဲ့ မြန်မာပြည်တွင် စစ်ဆေးခဲ့သော အမှုအခင်း စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာစံ လယ်သမား အရေးတော်ပုံအကြောင်းပါ။
အဲဒီမှာ မစ္စတာ မောရစ်ကောလစ်က ရေးခဲ့တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗြိတိသျှတွေဟာ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ကို မှားယွင်းစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့။ ပထမအချက်က ဗြိတိသျှတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား သက်သက်ကိုပဲ ထာဝစဉ် ရှေ့ရှုထားခြင်းနဲ့ ဒုတိယအချက်က မြန်မာလူမျိုးတွေကို လူသားအချင်းချင်း ဆိုပြီးတော့ သဘောမထားနိုင်ဘဲနဲ့ နိမ့်ကျယုတ်ညံ့တဲ့ တရိစ္ဆာန်တွေသဖွယ် သဘောထား ပြုမူခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်တဲ့။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ငွေမရှိ၊ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိတဲ့ မြန်မာတွေဟာ ကိုယ့်မြေပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ပြီးတော့ နေစရာမရှိ၊ စားစရာမရှိဘဲ ဆင်းရဲ ငတ်ပြတ်ကြတယ်။ အဲလိုမျိုး ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် မြန်မာတွေဟာ လူရာမဝင် ဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့် လယ်သမား သူပုန်ထပွဲကြီး၊ လယ်သမား တော်လှန်ရေးကြီး ဖြစ်လာရတယ် ဆိုပြီးတော့ သူက ရေးထားတယ်။
အခု တဖက်သတ် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေမှာလည်း ပြည်သူလူထုကို ကျွန်ဇာတ် သွင်းနေတာတွေကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကိုယ့်အမျိုးသားချည်း ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ဗြိတိသျှအစိုးရဲ့ ဆိုးနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြည်သူလူထုဟာ အားမတန်လို့ မာန်လျှော့ကြပေမယ့် အချိန်အခါ ပေါ်လာတိုင်းမှာ မိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသကြမှာ ဖြစ်တယ်။
ဗြိတိသျှအစိုးရ လက်ထက်မှာလည်း အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကြောင့် လယ်သမား အရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သလို ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ့်အမျိုးသားအချင်းချင်း ပြန်ပြီးတော့ သွေးချောင်းစီးရမယ့် ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ မလုပ်စေချင်ဘူး။
အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဖြစ်စေချင်တာက အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အားလုံး ပါဝင် လက်ခံစေနိုင်မယ့် ပုံစံမျိုးနဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပြီးတော့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရေးကို ပြုလုပ်သင့်ပြီ။ ဒါကို ရိုးသားမှန်ကန် စေတနာမှန်ကန်စွာနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ အလေးအနက် တောင်းဆိုတယ်။
အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေ၊ နှိပ်ကွပ်မှုတွေ ရှိပေမယ့် ပုံကန်ထကြွမှု၊ အုံကြွမှုဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘဝဟာ တကယ့်ကို လူစင်မမီတော့ဘူး၊ လူရာမဝင်တော့ဘူး၊ လူ့အောက်တန်း ကျနေပြီ။ အဲလို အောက်တန်းကျနေတဲ့ အခါမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေဟာ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ပေါက်ကွဲလာကြလိမ့်မယ်။ အဲလို ပေါက်ကွဲလာရင် ကိုယ့်အမျိုးသား အချင်းချင်း ရဝန်ဒါ နိုင်ငံမှာလို ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ၊ သွေးကြောင်းစီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ကျနော်တို့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။
အဲဒီတော့ အခုချိန်မှာ အချိန်မီ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်သင့်တာက အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်ဖို့ပါပဲ။ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ရှစ်လေးလုံး အနှစ် ၂ဝ မြောက်တော့မယ့် အချိန်မှာ အလေးအနက်ထားပြီး တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ 06 2008 21:20 - မြန်မာစံတော်ချိန်
တုန်ရီမှုန်ဝါး နေသည့် မီးအိမ်၏ အလင်းရောင်အောက်တွင် ကုတင်ပေါ်၌ အားလျားမှောက် လဲလျောင်းနေသော အဖေ့ကို သူ စိတ်မချမ်းသာဖွယ် တွေ့မြင်ရလေသည်။ အမေ၏ မျက်နှာသည်လည်း ပြိုတော့မည့် မိုးနှယ် အုံ့ဆိုင်းလျက်။ ဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်…။သူ့ လွယ်အိတ်ကလေးကို သူ တိုင်တွင်ချိတ်ပြီး အမေ့ဆီ သူ လျှောက်သွားသည်။ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ စိတ်တဝက်၊ အံ့သြစိတ်တဝက် တို့ဖြင့် အဖေ့ကို သူငေးကြည့်သည်။ မနက်ခင်း သူကျောင်းသွားသည့် အချိန်အထိတော့ သူ့ ဘဝတလျှောက် လုံးသည် သာသာယာယာ ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့ ရှိခဲ့သည်ချည်း ဖြစ်သည်။ အဖေ နှင့် အမေ၊ သူ့အစ်ကို သူ့နှမ၊ သူ မွေးဖွားလာသည့် အချိန်မှစ၍ တရိပ်ရိပ် တိုးတက် စည်ပင်လာသော သူ့အိမ်၏ စီးပွား။ ဘာဆိုဘာမှ လိုလေသေးမရှိ သည့်ဘဝတွင် သူ ကြီးပြင်းခဲ့ရ ပါသည်။ ယခု ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ…။ သူ စဉ်းစားသည်။ ကလေးအရွယ်သာ ရှိသေးသောသူ မှန်းဆ ၍မရ။ တစုံတယောက်များ ဆုံးပါးသွားလို့လား။ ဒါမှမဟုတ်…ဘာဖြစ်သည်လဲ။ သူ အိမ်အပြန် လမ်း တွင်လည်း လူတို့သည် ရုန်းစုရုန်းစု ဖြစ်လျက်။ တစုံတရာ ကို မကျေမချမ်း ပြောဆိုရေရွတ် နေကြ သည်။ တစုံတခု ကို အရေးတကြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေး နေကြသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေသည်လဲ။ မနေနိုင် တော့သည့် အဆုံးတွင် အမေ့ကို သူမေးလိုက်သည်။ အမေက ချက်ချင်းမဖြေ။ သည်တော့မှ အမေ့ မျက်ဝန်းတွင် ဝေ့သီနေသော မျက်ရည်စ တို့ကို သူ တွေ့ရလေသည်။ နောက် သူထပ်ကြားရသည်က အမေ့ နှုတ်ဖျားမှ စကားလုံးများ။ သည် စကားလုံးတွေ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို သူ လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားမလည် သော်လည်း အကြမ်းဖျင်း ကိုတော့ သူ ချက်ချင်း သဘောပေါက်လိုက်သည်။ သူတို့ မိသားစု ပိုင်ဆိုင် သမျှ၊ လက်ထဲတွင် ရှိနေသမျှ ငွေစက္ကူ အားလုံးနီးပါးသည် စက္ကူစုတ် သဖွယ် တန်ဖိုးမဲ့ ခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည် ။ ၁၉၈၇ ခု စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။
သည့်မတိုင်မီ ရက်သတ္တပတ် အလိုခန့်က အဖေသည် ရွှေဝယ်ရန် အတွက် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ် တွင် အပ်နှံထားသော သူတို့ မိသားစုပိုင် ငွေကြေးအတော်များများ ကို ထုတ်ယူခဲ့လေသည်။ သို့သော် သူတို့ ချက်ချင်း မဝယ်ဖြစ်။ တသက်တာပတ်လုံး ဝန်ထမ်းဘဝဖြင့်သာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလာခဲ့ရသည့် သူ့ မိဘနှစ်ပါးသည် ငွေ နှင့် ရွှေ ကို ဖလှယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းတွန့်ဆုတ် ခဲ့လေသည်။ သည်လို နှင့် နောက်ဆုံး သည်အဖြစ်နှင့် ရင်ဆိုင်တိုးခဲ့ရခြင်း။ ကနဦး တွင်တော့ တရားမဝင် ကြေညာ ခံရသော ၂၅၊ ၃၅ နှင့် ၇၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများ အား အစိုးရမှ ပြန်လည်လဲလှယ် ပေးလိမ့်မည်ဟု သူတို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သည်မျှော်လင့်ချက်က ရက်ကြာလာသည် နှင့်အမျှ ဝေဝါးမှေးမှိန်လာသည် ။နောက်ဆုံးတွင်တော့ တရားမဝင် ဖြစ်သွားသော ငွေစက္ကူများအား လျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းချရန် သူတို့ စီစဉ်ရသည်။ စာရင်းချုပ်လိုက်သောအခါ သူတို့ ဆုံးရှုံး သွားသော ငွေကြေး ဆယ်ပုံတပုံမျှ ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်တော့ အားလုံး၏ စိတ်ကူးယဉ်မှု တို့ နိဌိတံ ခဲ့ရသည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ငွေစက္ကူများ တရားမဝင် ပြုလုပ်မှုအား အတည်ပြုပြီး ၄၅ ကျပ် တန်နှင့် ၉၀ ကျပ်တန်များ အသစ်ထုတ်ဝေကြောင်း ကြေညာခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်ကတော့ သည်အဖြစ်အပျက်များသည် အဟုန်ပြင်းထန် လှသည့် မုန်တိုင်းမလာမီ လေပြင်းတိုက်ခတ် ခြင်းမျှသာ ရှိသေးကြောင်း ငါးတန်းကျောင်းသား အရွယ်သာရှိသေးသော သူ ရိပ်စားမိခဲ့ ခြင်း မရှိပါ။
တခုတည်းသော ပါတီ နှင့် တဦးတည်းသော လူပုဂ္ဂိုလ်က သူ့ ငယ်စဉ်ဘဝကို အရိပ်ထိုး လွှမ်းမိုးခဲ့လေသည်။ ပါတီမှာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဖြစ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ဖြစ်သည်။ ဘယ်သောအခါမှ အမှားအယွင်း မရှိနိုင်သော ဝါဒမှာ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ဖြစ်သည်။ သည်ဝါဒ ၏ လမ်းညွှန်မှုကို အတိအကျ ခံယူကာ ပါတီသည် သာယာဝပြောသော ဆိုရှယ်လစ် လူ့ ဘောင်သစ်ကို မနေမနား တည်ဆောက်နေသည်။ ပြီးပြည့်စုံ၍ တန်းတူညီမျှ သော လောကသစ်ဆီ မရပ်မနား ချီတက်နေသည်။ ထိုစဉ်က သူသိသည်က သည်လောက်မျှသာ ဖြစ်သည်။ နောက် သူသိ သော ပုဂ္ဂိုလ် ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုတော့ လွတ်လပ်ရေး၏ ဖခင်အဖြစ် တသွယ်၊နိုင်ငံတော်၏ သင်္ကေတ အဖြစ်တစ်နည်း သူ သိရှိ ခဲ့ရလေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အ ကျဉ်း ကဗျာကလေးကို သူ နှုတ်တိုက်ဖွဖွ ရွတ်ဆိုခဲ့ရသည်။ သူ သုံးစွဲရာ ငွေအကြွေများ၊ ငွေစက္ကူများ ပေါ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်၏ ရုပ်ပုံ တို့ကို သူ တရံမလပ် တွေ့ရှိ ခဲ့ရသည်။ သူ ပညာစတင် သင်ကြားရာ မူလ တန်းကျောင်းကလေး နှင့် သူ့ ဖခင်၏ ရုံးတို့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း တို့၏ ဓာတ်ပုံ များကို တူယှဉ်ချိတ်ဆွဲ ထားတာ သူ ကြိမ်ဖန်များစွာ မြင်ခဲ့ရသည်။ ညနေ ကျောင်းဆင်း ချိန် တိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် သီချင်းကို သူ သီဆို ခဲ့ရသည်။ ဒါတွေက ကလေးဘဝ တွင် သူ မှတ်မိသိရှိ နေသည့် နိုင်ငံ့ရေးရာ များ ဖြစ်ကြပါသည်။
နောက် သူ မှတ်မိနေတာက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း၏ မင်္ဂလာဆောင် ဓာတ်ပုံ များ သတင်းစာများ ထဲ တွင် ပါလာခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ "ကောင်းဖို့သည် ပထမ၊ တော်ဖို့သည် ဒုတိယ" ဖြစ်သောကြောင့် လူကောင်းလူတော် ဟုသာ သုံးစွဲရမည် ဟူသော အမိန့် ပညတ်တော် ဖြစ်သည်။ မတည်မငြိမ် ဖြစ်စ ပြု လာသော သူ့တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခု သူ့ စိတ်ထဲစွဲထင် နေသည်က "ကြက် သား ဝက်သား ဈေးကြီးရင်လည်း ငါးကြင်းကလေး ဘာလေးနဲ့ စားကြတာပေါ့" ဟူသော ဦးနေဝင်း၏ မိန့်ခွန်း တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်သည် (စကားလုံး အတိအကျ မမှတ်မိတော့သော်လည်း ထိုသဘော အ တိုင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ကို သူ ကောင်းကောင်း မှတ်မိသည်)။ သူ စတုတ္ထတန်းသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင်တော့ ပါတီသည် သူ ပညာသင်ကြားရာ စာသင်ခန်းကလေးထဲသို့ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ နွေ ရာသီတွင် ဖွင့်လှစ်သော တေဇလူငယ် သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန် သူ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရလေသည်။ သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်၊ ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင် သက်ဦးဆံပိုင် ခေတ်၊ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီ အရင်းရှင်ခေတ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် စသဖြင့် နိုင်ငံရေးစကားလုံး များကို သူ ပထမဆုံး ကြုံရကြားရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့် လွန်နှစ်များ တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်း ခဲ့သောသူတို့သည် နိုင်ငံရေး ကွင်းဆက် အဖြတ်ခံခဲ့ ရလေသည်။ ၇ ဇူလိုင် ကို သူတို့ မသိ၊ ဦးသန့်၊ အလုပ်သမား အရေးအခင်း၊ မှိုင်းရာပြည့် ဆိုသည်က ဝေလာဝေး။ သည်လိုနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ တဝိုက်တွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ၏ စည်းရုံးရေးက သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် လူမမယ် ကလေးသူငယ် အရွယ်သာသာများအကြားသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိ နိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ပြောင်း တော်လှန်ရေး အောင်ရမည် ဟူသော ကြွေးကြော်သံများ…..သမိုင်း အမှောင် ချထားသော နှစ်ကာလများ….သည်ကာလများ တွင်ပင် သူ မွေးဖွားကြီးပြင်း လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အာအိုင်တီ(ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ်) တွင် ကျောင်းသားများနှင့် လုံထိန်းများ အချင်းဖြစ်ပွား နေ ကြောင်း သူ့ဖခင်၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူထံမှ ဖုန်းဝင်လာချိန်တွင် ည ၁၁ နာရီ ထိုးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ မနက် ဖြန် (မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့) တွင် အတန်းတင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် သူ မအိပ်သေး၊ စာကျက်၍ ကောင်းတုန်းဖြစ်သည်။ ထိုညက သူသိသည်က သည်လောက်မျှသာ။ နောက်တနေ့ သူ စာမေးပွဲ ဖြေပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွင်တော့ အာအိုင်တီ တွင် ကျောင်းသားများနှင့် အရပ်သားများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီး ကျောင်းသားတဦး သေဆုံးသွားကြောင်း မြန်မာ့အသံ မှကြေညာသွားသည် ဟု သူ့ ဖခင်က သူ့ကိုပြောသည်။ မြို့ထဲတွင်လည်း သတင်းမျိုးစုံ ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ လမ်းပေါ်တွင် လူတို့ ဝိုင်းဖွဲ့လျက် ကြားသမျှ၊ သိသမျှ တို့ကို အချင်းချင်း ပြောဆို ဖလှယ်နေကြသည်။ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်တော့ နာမည်ကျော် တံတားနီ အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ လေသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ) မှ စက်မှုတက္ကသိုလ် သို့ ပြည်လမ်းအတိုင်း ချီတက်လာသော ကျောင်းသားများအား လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ များနှင့် စစ်တပ် က အင်းလျားကန် အနီးတွင် ပိတ်ဆို့ ချေမှုန်း ခဲ့ လေသည်။ အသေအပျောက် များစွာ ရှိခဲ့သော်လည်း အရေအတွက် အတိအကျ ကိုတော့ သူတို့ ဘယ်သောအခါမှ မသိခဲ့ရပါ။ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်တော့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော် သေဆုံးခဲ့ရသော ကိစ္စအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် တရပ် ဖွဲ့ စည်းကြောင်း အစိုးရက ကြေညာခဲ့လေသည်။
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က သူ့အတွက် စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်သည်။ သမိုင်းဘာသာ ဖြေဆိုရမည့်နေ့ ။ ထိုနေ့နံနက် ၁၁နာရီ ခန့်တွင် မြို့ထဲသို့ ကျောင်းသားများ ချီတက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကြားရ သည်။ ကျောင်းသွားရန်အတွက် သူ နှင့် သူ့အမေ အိမ်ကထွက်လာတော့ ၁၂ နာရီ ၁၅၊ မတ်လတွင်း ဖြစ်သော်လည်း ထိုနေ့က မိုး နည်းနည်းညို့နေတာ သူမှတ်မိသည်။ အနော်ရထာ လမ်းမကြီး တ လျှောက် လူသွားလူလာ က မရှိသလောက် ရှင်းလင်းနေသည်။ အခြေအနေ မကောင်းသည်ကို သူ့ မိခင် သိသော်လည်း အတန်းတင်စာမေးပွဲ ဖြစ်သောကြောင့် မဖြစ်မနေ လိုက်ပို့ရခြင်း ဖြစ်သည်( ထိုနေ့ က အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် စာမေးပွဲ လာရောက် ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသူများ စာမေးပွဲ ကျရှုံး ခဲ့ရပါ သည်)။ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း နားရောက်တော့ သူ့ထက်ကြီးသော အစ်ကိုကြီး တစု မျက်နှာတွင် ပုဝါများ ကို စီးနှောင်ကာ အနော်ရထာလမ်းအတိုင်း ပြေးလာကြတာကို သူ တွေ့ရသည်။ ဘယ်သူတွေပါလိမ့်…."ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသားတွေ" ဟူသော ဘယ်သူ အော်ဟစ်လိုက်မှန်း မသိသည့် အသံကို သူကြားရသည်။ သူ့ အမေ ကတော့ သူ့လက်ကို ဆွဲ၍ ကျောင်းဆီသာ သုတ်ခြေတင်လေ သည်။ နေ့လယ် တနာရီ စာမေးပွဲ စပြီး သိပ်မကြာ။ သူ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရာ အထက(၅)ဗိုလ်တ ထောင်၏ အပြင်ဘက်မှ အော်ဟစ်ကြွေးကြော် သံများကို သူ ကြားရသည်။ ထို့နောက် လူ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ပြေးလွှားသံများ၊ သည်အသံများ နှင့်အတူ စာသင်ခန်း ပြတင်းပေါက်အနီးတွင် ရပ်ကြည့် နေသော ဆရာမ ဖြစ်သူထံမှ "ကားမီးလောင်နေပြီ ကားမီးလောင်နေပြီ" ဟူသော အသံကို သူကြားရ ပြန်သည်။ သူ အပါအဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေသော ကျောင်းသားအချို့ မနေနိုင်ကြတော့။ မတိုင်ပင် ထားပါဘဲလျက် ဖြေဆိုရာ ခုံမှထ၍ ပြတင်းပေါက်ဆီ ပြေးသွားမိသည်။ ဘာကိုမှတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရ။ ဟိုးအဝေး ဗိုလ်တထောင်ခြောက် ဘက်ဆီတွင် မီးခိုးတွေ အူထနေတာ သူ တွေ့ရသည်။ လမ်းပေါ်တွင်တော့ လူ တယောက်မှ မရှိ။ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်လျက်။ ညနေ သုံးနာရီ စာမေးပွဲပြီး ချိန်တွင်တော့ သူတို့ မိဘတွေက ကျောင်းအပြင်တွင် စောင့်ကြိုနေကြ လေသည်။ သူ့ မိခင် ကို သူရှာ သော်လည်း မတွေ့ (လမ်းပိတ်ထားသောကြောင့် သူ့မိခင် နောက်ကျ နေခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်)။ တော် သေးသည်။ သူ နှင့် တလမ်းတည်း နေသူ သူငယ်ချင်း၏ ဖခင်က သူ့ကိုပါ ခေါ်သွားခဲ့လေသည်။ အနော်ရထာလမ်း နှင့် သိမ်ဖြူလမ်း ထောင့်နေရာ ရောက်တော့ ဆက်သွား၍ မရတော့။ လမ်းပိတ်ထား သည်။ စစ်သားတယောက်က အတွင်းဝန်ရုံး ရှေ့တွင် သေနတ်ကို ပိုက်၍ စောင့်ကြပ်လျက်။ မီးပွိုင့် များက ပြိုလဲနေသည်။ အုတ်ခဲကျိုး အပိုင်းအစများ၊ ကွန်ကရစ်တုံးကြီးများ နှင့် ဖန်ကွဲမှန်ကွဲစများ ကိုလည်း သူတွေ့ရသည်။ ကုန်သည်လမ်းဘက် မှပတ်၍ သူတို့ ပြန်ခဲ့ရလေသည်။ သူ အိမ်ပြန်ရောက် တော့ ညနေ လေးနာရီခွဲ တော့မည်။ သူ့ကို စိတ်ပူစွာဖြင့် စောင့်မျှော် နေသော အမေ့ကို အိမ်လှေကားရင်းတွင် သူ တွေ့လိုက်ရပါသည်။
ထိုနှစ် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်သည် သူကြုံဖူးသမျှ နွေကျောင်းပိတ်ရက်များထဲတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစ ရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု ဖြစ်တော့မည်ဟု လူတို့က တီးတိုး ပြောဆိုနေကြ သည်။ ထိုတနွေလုံး ပါတီဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးနေဝင်းက ခရီးထွက်ခွာနေသည်။ ဧပြီလတွင် အစိုးရက ဖွဲ့စည်းထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က မတ်လ အရေးအခင်းတွင် ကျောင်းသား သုံးယောက် သေဆုံးပြီး ၆၂၅ ယောက် အဖမ်းခံရကာ ၁၄၁ ယောက် (141 group ဟု လူသိများသည် ) ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ထားသည်ဟု ကြေညာသည်။ တဆက်ထဲတွင် ဦးအောင်ကြီး က ဦးနေဝင်း ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ လည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ မေလကုန်တွင်တော့ ပိတ်ထားခဲ့သော ကျောင်းများ ၊တက္ကသိုလ်များကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။မုတ်သုန် ဝင်လာပြီမို့ မြေသင်းနံ့ က သင်းပျံ့နေခဲ့ ရပြီ ဖြစ်သည်။
ဇွန်လဆန်းတွင် သူ ဆဋ္ဌမတန်း သို့ တက်ရသည်။ ဇွန်လလယ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၌ ဆန္ဒပြပွဲ များ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ် လာသည်။ သည်သတင်းများ နှင့်အတူ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံ ရေးအခြေအနေ က လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာသည်။ ကျောင်းများ၊ ဈေးများ၊ လမ်းမများ ပေါ်တွင် လူတို့က သောသောရုတ်ရုတ် ဖြစ်လာသည်။ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်ပတ်လားပဲမသိ၊ သူ ကျောင်းတက်လိုက်ရ လေ သည်။ ဇွန်လ တတိယပတ်အတွင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နယ်မြေကို အခြေပြု၍ ဆန္ဒပြပွဲ များ နေ့စဉ် ရက်ဆက် ဖြစ်ပွားကြသည်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ တွင်တော့ ဆန္ဒပြပွဲ၏ အခြေအနေက အမြင့်မားဆုံး အဆင့်သို့ ပေါက်ကွဲရောက်ရှိ ခဲ့သည်။ ပြည်လမ်း ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) မှ ရန်ကုန်မြို့လယ်သို့ ချီတက် ဆန္ဒပြကြသော ကျောင်းသားများ နှင့် လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့တို့ ဟံသာဝတီ လမ်းဆုံတွင် အချင်းဖြစ်ပွားကြ သည်။ ကျောင်းသားပြည်သူ ၈၀ ခန့်နှင့် လုံထိန်း ၂၀ သေဆုံးပြီးနောက် အာဏာပိုင်များက ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်၍ လူစုဝေးခြင်းကို ရက်ပေါင်း ၆၀ ကန့်သတ်လိုက်လေတော့သည်။ တပြိုင်နက်တည်း မှာပင် ညနေ ခြောက်နာရီ မှ နံနက် ခြောက်နာရီ အတွင်း အိမ်ပြင်မထွက်ရ အမိန့်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။ ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ အားလုံးကိုလည်း ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်လိုက်ခြင်း ဖြင့် တုံ့ ပြန်ခဲ့လေသည်။
သို့သော် ဆန္ဒပြပွဲ များကမရပ်။ လူထု၏ တော်လှန်ရေးဒီရေ က တရိပ်ရိပ် တက်လာခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်များကို ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းသားများက သပိတ်စခန်းကို ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ပဲခူးတွင်လည်း ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒပြပွဲ များဖြစ်ပွားပြီး လူပေါင်းများစွာ ပစ်သတ်ခံရပြန်သည်။ မော်လမြိုင် နှင့် ပြည် တို့တွင်လည်း ဆန္ဒပြပွဲ များဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ ပထမပတ် တွင်တော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ က အရေးပေါ်ညီလာခံ ကို ဇူလိုင်၂၃ တွင် ကျင်းပမည် ဟု ကြေညာသည်။ မြန်မာ့အသံ မှလည်း မတ်လအတွင်း ဖမ်းဆီးခဲ့သော ကျောင်းသား အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးမည် ဟု ကြေညာသည်။ အချိန်အနည်းငယ် လျှော့ချလိုက်သည် ကလွဲ၍ ည မထွက်ရ အမိန့်ကတော့ ရှိနေဆဲ (ဇူလိုင်ဒုတိယပတ် တွင်ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်)။ ထိုအချိန် တဝိုက်လောက်မှာပင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပေါ် လာသည်။ ဒါကတော့ လူထုအုံကြွမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း လမ်းလွှဲစေရန် အာဏာပိုင်များ အသုံးပြုနေ ကျနည်းလမ်း။ သိပ်တော့မဆန်းလှပါ။ ပြည်မြို့ နှင့် တောင်ကြီးမြို့တို့တွင် အဓိက ဖြစ်ပွားခဲ့လေသည်။
ဇူလိုင်၂၃ ရက်နေ့တွင်တော့ ပြည်သူအားလုံး စောင့်မျှော် နေခဲ့ကြသော ပါတီအရေးပေါ် ညီလာခံကို ကျင်းပသည်။ ဘာတွေများ ပြောင်းလဲမလဲ၊ နောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဦးမလဲ…။ သည်အတွေးတွေ နှင့် သူတို့ မိသားစု ညဘက် ရုပ်မြင်သံကြား ကို ရင်တခုန်ခုန် စောင့်ကြည့်ကြသည်။ ညီလာခံ ပထမနေ့ တွင် ဦးနေဝင်း က ပါတီမှ အနားယူတော့မည် ဟုပြောပြီး တပါတီစနစ် သို့မဟုတ် ပါတီစုံစနစ် ကျင့် သုံးရန်အတွက် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်ရန် အဆိုတင်သွင်းသည်။ ဒုတိယနေ့တွင်တော့ တက် ရောက်လာသော ကိုယ်စားလှယ်များက ပြည်သူ့ဆန္ဒ ခံယူပွဲ ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ် ကို ကန့်ကွက်ကြ သည်။ တတိယနေ့တွင်တော့ ဦးနေဝင်းအား ပါတီဥက္ကဌ အဖြစ်မှ အနားယူမှု ကိုသာခွင့်ပြုပြီး ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲ မပြုလုပ်ရန် အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြလေသည်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒါပါပဲ။ ပါတီစုံ စနစ် ဖြစ်တော့မည်လား ဟု သူတို့အားလုံး ၏ မျှော်လင့်ချက်တို့ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။ သည်ပါတီညီလာခံမှပင် ဦးနေဝင်း၏ "စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်တယ်၊ မိုးပေါ် ထောင်မပစ် ဘူး" ဆိုသည့် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသည့် မိန့်ခွန်း ကိုသူတို့ ကြားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပါတီဥက္ကဌ သစ်ဖြစ်လာသူက ဦးစိန်လွင်၊ လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့များ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီး အရေးအခင်းများကို သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းလေ့ရှိသူ "သားသတ်သမား" ဟု နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသူ၊ သူတို့ လိုချင်သည်က ပြည်သူ့ဆန္ဒ နှင့် ကိုက်ညီသော အပြောင်းအလဲ။ ယခု တော့….။ သို့သော် အုပ်ချုပ်သူ တို့က အပြောင်းအလဲ ကို ငြင်းဆန်လျှင် ပြည်သူတရပ်လုံးက မိမိ ဘာသာပြောင်းလဲရန် ထိုစဉ်ကပင် ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ပါတီညီလာခံ ပြီးလျှင်ပြီးချင်း ဆန္ဒပြပွဲ တို့က ရွှေတိဂုံဘုရား ကို အခြေပြု၍ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက် လာသည်။ သြဂုတ်လ ၃ရက်နေ့ တွင်တော့ ရန်ကုန်မြို့၌ မာရှယ်လော ထုတ်ပြန်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့သည်။ သို့သော် သည်တခါတော့ ၂၆နှစ် တိုင်တိုင် ဖိနှိပ် ခံခဲ့ရသည့် ပြည်သူတို့က တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့သော ဥပဒေကို လိုက်နာရန် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ငြင်းဆန် ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။ စစ်ဥပဒေ ကိုအန်တု၍ ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သည်အချိန်မှာပင် တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ နှင့် လူထုလူတန်း စားအသီးသီးက အထွေထွေ သပိတ်ကြီးအား ဆင်နွှဲရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူ ကြားသိရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘယ်နေ့ကို ရွေးချယ်မလဲ…..ဂငယ်သုံးခု ဥသျှစ်ထု ဟူသည့် ရာဇဝင်လာ တဘောင်ကို သူ ယခု ပြန်ကြား လာရပြန်သည်။ သည်တစ်ခါက ဂငယ်လေးခု။ ဟုတ်သည်။ ရှစ်လေးလုံး ဆုံသည့် သြဂုတ်လ ရှစ်ရက် နေ့တွင် တိုက်ပွဲကို စတင်ရန် ပြည်သူတို့က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တိုက်ပွဲခေါ်သံ ကို သူ ပြက်ပြက်ထင်ထင် ကြားခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုနေ့သည် ခါတိုင်း သူ ကြုံတွေ့နေကျ တနင်္လာနေ့ များနှင့် ဘာမှ မကွာခြားသည့် တနင်္လာနေ့တနေ့ သာဖြစ်သည်။ သို့သော် ခါတိုင်းနှင့်မတူ၊ ထိုနံနက်တွင်တော့ စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွမှု အပြည့်ဖြင့် သူ နိုးထ လာခဲ့လေသည်။ မနက်ရှစ်နာရီ။ အဖေကတော့ ရုံးသွားရန်အတွက် ထမင်းစားရန် ပြင်ဆင်နေ သည်။ အမေကလည်း မီးဖိုထဲတွင်။ သို့သော် အဖေ နှင့် အမေ အပါအဝင် သူတို့ မောင်နှမအားလုံး လမ်းပေါ်မှ တစုံတရာသော အသံကို နားစွင့်နေကြသည်။ သိပ်ကြာကြာမစောင့်ရ။ မနက် ရှစ်နာရီ ဆယ့်ငါးတွင် လမ်းထိပ်ဘက်ဆီမှ "တို့အရေး တို့အရေး" ဟူသော အသံကို သူကြားလိုက်ရသည်။ သူ ဒရောသောပါး ဝရန်တာဆီ ပြေးထွက်သွားသည်။ သူ့ မိသားစု လည်း သူနှင့်အတူ။ သူ့ အခန်း နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ဘေးကပ်လျက် ဝရန်တာတို့ တွင်လည်း လူများ အသီးသီး ထွက်ရပ်နေကြသည်။ မကြာမြင့်မီတွင်ပင် အနော်ရထာ လမ်းမကြီးတလျှောက် ချီတက်လာသော ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်းအား သူ တွေ့မြင်ရလေသည်။ ထို့နောက် သူ ကြားရသည်က တညီတညွတ်ထဲ တီးလိုက်သော လက်ခုပ်သံများ၊ သူ့ လက်ခုပ်သံလည်း အပါအဝင်။ အားလုံး၏ ရင်တွင် လှိုင်းထလျက်။ ထို့နောက်တွင်တော့ နောက်ထပ် ဆန္ဒပြ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ နေမြင့်လာသည် နှင့်အမျှ ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်း များက စိပ်သည်ထက် စိပ်လာသည်။ ဆန္ဒပြသူများက များသည်ထက်များ လာသည်။ ခွပ်ဒေါင်းအလံ ကို သူ ပထမဆုံး မြင်ဖူး ရခြင်းဖြစ်သည်။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်က အသုံးပြုခဲ့သော ပြည်ထောင်စု အလံ ကိုလည်း သူ တွေ့ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ဓာတ်ပုံတို့ကို ကိုင်သူတို့က ကိုင်လျက်။ ထိုနေ့တနေ့လုံး ဝရန် တာတွင်သာ သူ အချိန်ကုန် ခဲ့ရလေသည်။
ညနေ အဖေ ရုံးမှ ပြန်ရောက်လာတော့ ဆန္ဒပြပွဲ သတင်းတို့ကို သူ စုံစုံလင်လင် ကြားသိရသည်။ မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့တွင် သောင်းသိန်းချီသော လူထုကြီး ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရ သည်။ ည ရှစ်နာရီ ခန့်တွင်တော့ အဖေ နှင့် သူတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် မြို့တော်ခန်းမ ဘက်ဆီ ထွက်လာခဲ့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှား လွန်းသောကြောင့် သူ ငြိမ်ငြိမ် မနေနိုင်။ အဖေ့ ရှေ့မှ ခုန်ဆွခုန်ဆွ ပြေးသွားမိသည်။ "မြန်မြန်လာပါ ဖေကြီးရ" ဟု အဖေ့ကို သူ လှည့်လှည့်ခေါ်သည်။ ဘားလမ်းနား ရောက်တော့ အဖေက သူ့ကို စိတ်မချတော့။ သူ့ လက်ကို တင်းတင်း ဆုပ်ထားလိုက်တော့သည်။ မြို့တော်ခန်းမ အနီးသို့ သူတို့ ချဉ်းကပ်၍မရ။ ထောင်သောင်းမကသော လူထုကြီးက ဝိုင်းရံလျက် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ စည်ပိုင်းပေါ်တွင် ခုံကိုဆင့်၍ တရားဟောနေသူ တို့ကိုလည်း အဝေးမှ သူ တွေ့နေရသည်။ သူ့တသက်တွင် သည်မျှ များပြားသော လူအစုအဝေးကို မမြင်စဖူး။
ရှစ်လေးလုံး အနှစ် ၂၀ ပြည့်နှင့် သူတို့ အမြင်
ဧရာဝတီ | သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၀၈
သံအမတ်ဟောင်းနှင့် ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီး
အနှစ် ၂၀ ကြာလာပြီးတဲ့ အချိန်မှာ တပ်မတော်အစိုးရက နေရာတကာ ချုပ်ကိုင်မှုတွေပိုမို လုပ်လာတယ်၊ ဆက်လက်ပြီး တရားဝင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအောင်လည်း လာမယ့် ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထား တယ်၊ သူတို့က တောင့်တင်းသထက် တောင့်တင်းအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ တိုင်းပြည်မှာကျတော့ စီးပွားရေးက ကျဆင်းနေတယ်၊ တခြားသော ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လူမှုဘ၀ စတာတွေရဲ့ စံချိန် စံညွှန်းတွေကလည်း ကျသထက်ကျနေ ပါတယ်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ မ၀င်ဆန့်ဘူး၊
အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေဘက်ကလည်း အားနည်း လာနေတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်း အစိုးရက ထောင်တွေမှာ ပြန်မလွှတ်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်နဲ့က ဝေးကွာ နေဆဲ လို့ မြင်တယ်၊
ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်နဲ့ နီးဖို့ဆိုရင် မင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့၊ ဦးအုန်းသန်း တို့ ၊ စုစုနွေးတို့လို လူတွေ နိုင်ငံ တ၀န်း ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ချီပြီး အများကြီးထွက်လာဖို့ လိုပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ တပြည်လုံးရှိ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ အဲဒီ အချိန်က ရှိခဲ့တဲ့ ဆိုရှယ်လစ် ၀ါဒလို့ ဆိုတဲ့ ဆိုရှယ်လစ် တပါတီ အာဏာရှင် စနစ် ကို တွန်းလှန်တာ၊ လိုချင်တာက ဒီမိုကရေစီ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ တ၀က်ပဲ အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမယ်၊ ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရပြုတ်ကျသွားတယ်၊ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်မရဘူး၊ ဒီမိုကရေစီပြန် မရခြင်းရဲ့အဓိက တာဝန်ရှိတာ ကတော့ အဲဒီအချိန်က အာဏာရယူ ထားတဲ့ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(န၀တ) ပေါ့၊ သူတို့မှာ အဓိက တာဝန်ရှိတယ်၊
တ၀က်ပဲ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာက ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရပြုတ်ကျဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ တိုက်ပွဲ ၀င်ရာမှာ ဆိုရှယ် လစ် အစိုးရတော့ ပြုတ်ကျခဲ့တယ်၊ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ မရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် တ၀က်ပဲ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်၊
အခုလည်း ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်၊ အန်အယ်လ်ဒီ အလံအောက်မှာ ၀င်တယ်၊ တသီးပုဂ္ဂလ လည်း ၀င်နေကြတာ အများကြီးပါ၊ အခုအထိ ကျနော်တို့ မအောင်မြင်သေးဘူး၊
သို့သော်လည်းပဲ တိုင်းပြည်ကို စီမံ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတွေ ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို ပြည်သူလူထုက မယုံဘူး၊ ပြည်သူ လူထု ယုံကြည်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစား အားထုတ်ဖို့၊ စိတ်ရှည်ဖို့ကို ကျနော် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ၈၈ က မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်နေကြတာပါ၊ ကျနော်တို့ အဲဒီ အချိန်ကနေ ကနေ့အထိ နှစ်ပေါင်း ၂၀ မအောင်မြင်သေး သော်လည်း အရှိန် အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ
ရှစ်လေးလုံး အနှစ် ၂၀ ကတော့ ကျနော့် တဦးချင်း အမြင်အရ မြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးအရ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ၁၉၄၈ ကနေ ၁၉၆၈ ၊ အဲဒီက နေပြီး တခါ ၁၉၈၈ ပေါ့၊ အဲဒီလို အနှစ် ၂၀ တွေနဲ့တော့ မတူတာတော့ အမှန်ပဲ၊ အောင်မြင်မှုတွေ လည်း ကြီးမားတယ်၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ကြီးမားတယ်၊ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်း မှာ မရခဲ့ဖူးတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရတယ်၊ မဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ပြည်သူတွေ ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်၊ တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘယ် ခေတ်နဲ့မှ မတူတဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အစိုးရရဲ့ လက်အောက် ကို ရောက်ခဲ့ရတယ်။
တိုင်းပြည်လည်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက် အင်္ဂလိပ်ခေတ်ထက်ဆိုးတဲ့ ဘ၀မျိုးရောက်ခဲ့ရတယ်၊ အခု အနှစ် ၂၀ မှာ ပေးဆပ်မှုကအင်မတန်ကြီးတယ်၊ တချို့နေရာမှာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက သေရဲတယ်၊ အသတ် ခံရဲတယ်၊ အဖမ်းခံရဲတယ်၊ အရိုက်ခံရဲတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အောင်ပွဲ မယူရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စပြီး နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေအပါ ကျနော်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
အကွီနိုလိုမိန်းမမျိုးရှိတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ရာမို့စ်လို ဗိုလ်ချုပ် တယောက်မှ မရှိဘူး၊ ကျနော် တို့ဟာ အာဏာအရယူရေးပွဲမှာလက်နှေးနေကြတယ်၊ အနိုင်မယူရဲဘူးဖြစ်နေတယ်၊ အောင်ပွဲ မခံယူရဲဘူး၊ အောင်ပွဲခံဖို့ အနိုင်ယူဖို့ဆိုတာက မနှစ်က ၉ လ ပိုင်း စက်တင်ဘာမှာလို သူကရိုက်သတ်နေတာ ကို ကျနော် တို့က လက်တုံ့ပြန်ရမှာမျိုး၊ ရှစ်လေးလုံး ကာလမှာလည်း ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ သမိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ဒီလောက် အောင် မြင်မှုရှိခဲ့ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ် ရာမို့စ် လို လူတ ယောက် မရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ရဲဘော်ပေါင်း များစွာ၊ ပြည်သူပေါင်း များစွာ ရဲ့ အသက်သွေးချွေး ပေးခဲ့ရ တဲ့ အောင်ပွဲကြီး လက်လွတ်ခဲ့ရတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို အတည်ပြုမယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်နဲ့ ဝေးနေမှာပဲ၊ ကျနော်တို့ဘက်က အခက်အခဲပေါင်းစုံ ရှိသလို အစိုးရဘက်မှာ လည်း အခက်အခဲ ရှိတာပဲ၊ အဲဒါကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်နိုင်ပြီးတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှု နဲ့ ချီတက် ကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ အနာဂတ် အောင်ပွဲဟာ မဝေးတော့ပါဘူး။
၁၉၈၈ ခုနှစ်လှုပ်ရှားမှုဟာ စစ်အစိုးရဟာ သူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူး ဆိုတာပြတာပဲ။ တိုင်းပြည်မှာ လူအများစုပါတဲ့ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးမျိုး လိုအပ်လာပြီ။ တိုင်းပြည်မှာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ပိုကောင်းဖို့၊ ပွင့်ပွင့်လင်း လင်းရှိဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ။ ၈၈ ထိ ၂၆ နှစ်တာ တပါတီစနစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာ၊ အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းတာ မရှိခဲ့ဘူး။ အတိုက်အခံ ဘက်ကလည်း စစ်အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲလိုမလုပ်နိုင်ခဲ့တာက အတိုက်အခံဘက် က လည်း မညီဘူး။ အပေးအယူ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ဒီလောက် အခြေအနေ ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ချင်ရင် တယောက်နဲ့ တယောက် အပြတ်ချမယ်ဆိုတဲ့ ရန်လိုတဲ့စိတ် တွေ ဖျောက်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ရန်လိုတဲ့ စိတ်တွေ အများကြီးတွေ့နေရသေးတယ်ဗျ။ နှစ် ၂၀ မှာပြန်ကြည့်ရင် ကျနော်တို့က စစ်အစိုးရကို အထီးကျန်အောင်လုပ်ဖို့ အကြီးအကျယ် တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ခဲ့တယ်။ အဲဒီကိစ္စကိုလည်း ပြန်စဉ်းစားသင့်ပြီဗျ။ တကယ်က စစ်အစိုးရဆိုတာကို က အထီးကျန်ဆန်ဆန်ပဲ နေလာ တာ။ အဲလို အထီးကျန်ခဲ့လို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့ နည်းပညာတွေ၊ အကူအညီတွေ၊ နိုင်ငံခြားက ရနိုင်တာတွေ မရခဲ့ဘူး။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်း ဘယ်လိုမှကို ပြောလို့ မရဘူး။
ဥပမာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံဟာ တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲ နေပါစေ၊ တကယ်လို့ တခြား နိုင်ငံတွေနဲ့သာ ရင်းနှီးခဲ့မယ်ဆိုရင် နာဂစ်လို ကိစ္စမျိုးမှာ ကျနော်တို့ဟာ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကောင်းကောင်း ကူညီနိုင်မယ်။ ခုဟာက နိုင်ငံတကာက ကူညီချင်ပါတယ်ဆိုတာတောင် စစ်အစိုးရက ဆန့် ကျင်ပြီး မယူဘူး ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာမျိုးတွေရှိ ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ ပညာရေးတွေကို ပြန်ပေးဆွဲထားသလို လုပ်ထားတာ ကတော့ ရပ်တန့်သင့်ပြီလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ထင် တယ်ခင်ဗျ။
အဲတော့ ဒါတွေကို လက်တွေ့ကျကျ သေသေချာချာ သုံးသပ်ပြီးမှ လာမယ့် နှစ် ၂၀ နောက်ပိုင်းကို ဘယ်လို သွားကြမလဲ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ တကယ်ပဲကောင်းသလား။အထီးကျန်ဆန်မှုဟာ တကယ်ပဲကောင်း သလား။ စစ်တပ်ထဲမှာ ဘာကြောင့် ခုလိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေရတာလဲ။ ဒါတွေကို သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ကျနော်မြင်တယ် ခင်ဗျ။
ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံတွေဟာလည်း တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကို စေတနာရှိကြပါတယ်။ တကယ်လည်း စွန့်လွှတ်ပြီး လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ ဒီလောက် နှစ် ၂၀ လောက် လုပ်လာတယ် ဆိုတော့လည်း သူတို့ ရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကို မေးခွန်းအထွေအထူး ထုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြဿနာ က ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေက လွတ်လပ်တဲ့ ဒေသတွေမှာ နေတဲ့အခါကျတော့ ပိုပြီးပြင်း ပြင်းထန်ထန် လုပ်တာကိုင်တာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေဟာလည်း အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တာ ဖြစ်တဲ့ အ တွက် လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဒီနယ်စပ်က အင်အားစုတွေမှာ ရေရှည် ကြည့်တတ်တဲ့အမြင်နဲ့ ဒီမို ကရေစီကို ဘယ်လိုပိုပြီး အားကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ရေရည်အမြင်နဲ့ နားလည်မှု၊ ပြင်ဆင် မှုတွေ တော်တော် နည်းတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း အနှစ် ၂၀ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ဒီဘက်မှာ ဘာမှတိတိကျကျ မ အောင်မြင်ဘဲနဲ့ ပိုပြီး နောက်ဆုတ်လာရတဲ့ အနေအထား မျိုးဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ ဒီမို ကရေစီရဖို့ အနည်းဆုံး အနှစ် ၂၀၊ နှစ်၃၀ ကြာနိုင်တယ် ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ လက်ထက်မှာတောင် ရနိုင်ချင်မှ ရနိုင်မှာ ဆိုတော့ ရေရှည် အမြင် ရှိဖို့လို တယ်ဗျ။ အတိုက်အခံအင်အားစုတွေမှာ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွေ အားလုံးကို သေသေချာချာ နားလည် ကျွမ်းကျင်ကြ ပေမယ့် အဲဒီလို ရေရှည် အမြင်မျိုး ကျနော်လုံးဝမတွေ့မိ ဘူးလို့ ထင်တယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း
၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးက တကယ့်လူထု အုံကြွမှုကြီး တခုပါပဲ။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အကြီးဆုံး လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ လောက် ကြီးမားတဲ့ အုံကြွမှုကြီးက ဘာကြောင့် အဆုံးမ သတ် နိုင်ရတာလဲလို့ ခု အနှစ် ၂၀ အကြာမှာ ပြန်စဉ်းစားကြည့် လိုက်တော့ နိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေ အမျှော်အမြင် နည်းခဲ့လို့ပဲလို့ ထင်တယ်။ အဲဒီအချိန်က ဦးဆောင်သူတွေ လွဲမှားခဲ့ တယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ တကယ့်တကယ့် ကိုယ်က အသာစီးရနေခဲ့ချိန် ကျနော်တို့ဘက်မှာ အစိုးရသစ် တခု အဆင်သင့် ရှိမနေခဲ့ဘူး။ ဒါက အဲဒီတုန်းက အခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ်တာပါ။ ခုချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည်သူလူထုက စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားဖိနှိပ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် မှုကို အပြင်းအထန် ခံစားနေ ရပြီး မလှုပ်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရပြီ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာက စစ်အစိုးရကို ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာတော့ အရမ်းကို သံတမန် ဆန်လွန်းတယ်။ အားမရဘူးပေါ့ဗျာ။
၈ ရက် ၈ လ ၈၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ သွေးမြေကျခဲ့ရတယ်၊ ရိုးသားဖြူစင် သန့်ရှင်းတဲ့ ရဟန်း ရှင်လူ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေ သွေးတွေ ကပ်တရာလမ်းတွေပေါ်မှာ ကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ အဲဒီကျဆုံးမှုတွေက ၁၉ နှစ်တိုင်သည်အထိ ကျနော် တို့တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီ မရသေးဘူး။ အဓိက ပြောချင်တာက ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ် ကို ကျနော်တို့ ရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းထားတယ် … မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရအောင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအနေနဲ့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပြောချင်ပါတယ်။
(ရန်ကုန်မြို့ သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းတိုက်၌ ရှစ်လေးလုံး ၁၉ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပစဉ် ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုချက်)
၈၈ တုန်းက ဒီလောက်အများကြီး သွေးတွေ ချွေးတွေပေးဆပ်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်ထိ အပြောင်း အလဲမဖြစ်တဲ့ အပေါ်မှာတော့ အထူးပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို လူတွေပိုမို လက်ခံလာကြတယ်။ ဒါကတော့ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ရခဲ့တဲ့ ကြီးမားတဲ့ရလာဒ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အဲဒီအရှိန်နဲ့ပဲ တချိန်ကျရင်တော့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မှာပါ။ ၁၉၈၈ လှုပ်ရှားမှုကြီးက အနှစ် ၂၀ ကြာခဲ့ပေမယ့် ဆက်သွားနေတုန်းပဲဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သံဃာ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ၈၈ ကျောင်းသားတွေက စခဲ့တာပဲ။ နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှု တွေ ထပ်ဖြစ် လာဦးမယ်ဆိုရင်လည်း ၈ လေးလုံးမျိုးဆက်က တစုံ တရာ ပါဝင်ပတ်သက်နေဦးမှာပဲ။ အဲဒီ အတွက်တော့ ဂုဏ်ယူတယ်ဗျ။ ၈ လေးလုံး မျိုးဆက် အနေနဲ့ ခုချိန်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို ဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့အတွက် တော့ တစုံတရာ အားနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နောင်ဖြစ်လာမယ့် ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွက် အထောက်အကူ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါ။
အနှစ် ၂၀ တိုင်ခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် ကျနော့်မှာတော့ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကရှိနေတုန်းပဲ။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အာဏာရှင်ဆိုတာ ကာလတစုံတရာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမယ့် တသက်လုံး တော့ ထိန်းမထားနိုင်ဘူးလေ။ တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ ဆိုဗီယက်ရုရှားလိုနိုင်ငံကြီးတောင် ပြိုလဲခဲ့ရသေးတာပဲ။မြန်မာ စစ်အစိုးရကတော့ ခုထိခိုင်မာနေသေး တယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့် စီးပွားရေး ဖူလှုံမှု၊ တိုးတက်မှုကို မဖန်တီး ပေးနိုင်သရွေ့ မတည်ငြိမ်မှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်။ အခွင့်သာရင် လူတွေက လမ်းပေါ်တက်ပြီး ဆန္ဒပြတာ မျိုးတွေ လုပ်ပြီး အစိုးရကို ဖြုတ်ချတာမျိုးတွေ လုပ်နေဦးမှာပဲ။
ကျနော့်အမြင် ပြောရရင် ခုလောလောဆယ် လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေက မအောင်မြင်နိုင်သေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေ ရယ် နိုင်ငံတကာက ဖိအားရယ် ၈၈ က ပြောင်းလဲလာတဲ့ မျိုးဆက်ရယ် အဲဒီ ၃ ခု ပေါင်းဆုံ လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံး မျှော်လင့်နေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အလားအလာ အများကြီး ရှိပါတယ်။
အနှစ် ၂၀ အကြာမှာ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ကတော့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အာရုံစိုက် မှုကို ဆက်ထိန်း ထားနိုင်တယ်၊ ပြည်တွင်းကိုလည်း ထောက်ပံ့မှု တစုံတရာ ပေးထားနိုင်တယ်။ ဆက်လက် တည်တံ့နေတာတော့ရှိ တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပအတိုက်အခံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ အားနည်းတဲ့ အချက် ကတော့ ညီညွတ်ရေးလို့ပဲ ပြောရမယ်။ တနိုင်ငံ လုံးရဲ့အရေးကို အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်တာထက်စာရင် ကိုယ့်အဖွဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပိုစိတ်ဝင်စားပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် မှုတွေ အားနည်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့။ကိုယ်သာ လျင်လှုပ်ရှားမှုကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုပြီး တလွဲမာနတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာ တတွေနဲ့ ခုချိန်ထိ အပြိုင်အဆိုင် လိုဖြစ်နေတာ တွေ့ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက် တဆင့်ကို ကျော်လွန်ပြီး ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်။
အနှစ် ၂၀ ရှိပြီ … စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်နေပါတယ်လို့ သာပြောနေတယ်၊ ယနေ့အထိ အာဏာရှင်စနစ်ပုံစံနဲ့ သွားနေတုန်းပဲ။ ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက် သွားနေရင် ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တဘက်မှာ ဒီမိုကရေစီအင် အားစုတွေကို သုံးသပ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော် တို့ ဟာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးတွေကို ဖြတ်လျှောက်ရဲတဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ ရှိရုံနဲ့တင် မလုံလောက်ဘူး။ အခြေအနေ အချိန် အခါနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကိုလည်း စဉ်စားဖို့လိုနေပြီ။ ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ပမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စိတ်ကူးထင်ရာလုပ်မနေဘဲ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ အပြန်အလှန်လေးစား မှုတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီး ဟန်ချက် ညီညီ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုတယ်။ နောက်တချက် က ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ ပါတီအဖွဲ့ အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ဟာ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ပြည်သူလူထုအတွက် လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့အချက်တွေမှာ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပြတ်ပြတ် သားသား ဦးဆောင်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်ကျော်သွားမှ လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း တွေ လျော့သွားလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ စည်းရုံးရေးက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ရတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ သွားရမယ့်ပုံစံက တပိုင်း၊ တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်မရတဲ့အင်အားစုတွေ သွားရတဲ့ပုံစံနဲ့ ၂ မျိုး တွေ့ရတယ်။ တရားဝင် ရပ်တည် ခွင့်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းက စနစ်ကျတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပိုပြီး ဆောင်ရွက်သင့် တယ်။ ကျနော်တို့ အပါအ၀င် တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့်မရအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးစားကြဖို့ လိုတယ်။ ဥပမာ - ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုမှာ ကျနော်တို့ဟာ ကွန်ယက်တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မတည် ဆောက်ထားနိုင်တာ၊ ဦးဆောင်မှုမပေးနိုင်တာကြောင့် ရလဒ် ကောင်းတွေထွက်လာပါနိုင်ရဲ့နဲ့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြ ဘူး။
ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာကတော့ စိတ်ဓာတ်ရှိရုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်တိုင်ကို မရောက်ဘူး၊ စိတ်ဓာတ်ရှိရုံနဲ့ ပြည်သူ လူထုရဲ့ စားဝတ်နေရေးတွေ ပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီစိတ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ခြေ တွေ၊ လက်တွေ လှုပ်ရှားဖို့လိုမယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ကျနော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ရလိမ့်မယ်။ ဘေးကနေ လက်ခုပ်တီး နေရုံ နဲ့ မလုံလောက် ပါဘူး၊ အကြောက်တရားတွေကို လျှော့ဖို့လိုပါတယ်။ သတ္တိမွေးကြပါ၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ ပြည်သူလူထုကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
(မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ်)
ရှစ်လေးလုံးဟာ မြန်မာ့သမိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့ မှတ်တိုင်တခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရမှာ ပါ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တောင်းဆိုမှုဟာ ယနေ့အထိ ရှိနေတုန်းဆို တာကို ပြောလို့ရတယ်၊ ဒါကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ သံဃလှုပ်ရှားမှုကြီးက သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။
အနှစ် ၂၀ လောက် တိုက်ပွဲကမပြီးဆုံးသေးဘဲ ဖြစ်နေပေမယ့် လူနော်တို့ရည်မှန်းတဲ့ခရီးကိုရောက်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အနှစ် ၂၀ ကာလအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ အသံကလည်း ပိုပြီးစုစည်း လာတယ်၊ နိုင်ငံတကာအင်အားစုကလည်း ကျနော်တို့အရေးကို အာရုံစူးစိုက်မှုတွေ ပိုများလာတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကျနော်တို့ကြားမှာလည်း စုစည်းညီညွတ်မှုတွေ ရလာတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကလည်း နအဖ စစ်အာဏာ ရှင်ရဲ့ သရုပ်မှန်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာပြီး ရှစ်လေးလုံးမှာ စခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တောင်းဆိုမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ငြင်းပယ်မှုနဲ့ နအဖ သက်ဆိုးရှည်မယ့် အုပ်ချုပ် မှုကို အပြီးသတ်ငြင်းဆန်နိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တပြိုင်တည်း လက်တွဲလှုပ်ရှားကြဖို့ လိုပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး
၁၉၈၈ ကနေ အနှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း ပြန်ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ လုံးဝ ကင်းလွတ်လို့ မရလို့သာ အတိုင်းအတာတခုလောက် ရွေ့လျားတိုးတက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်က ကမ္ဘာ ကြီး ပေါ်က ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့ တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်တွေ၊ အီးမေးလ်တွေ အီလက်ထရွန်းနစ် မီဒီယာတွေ စတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ဒါကို တိုးတက်မှုလို့ မြင်လို့မရ ပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ပြုတ်ကျခါစ အရှိန်လေးနဲ့ ခဏလိုက်ရွေ့တဲ့ သဘောပါ။ အချိန်ကြာတာနဲ့ အမျှ ကျနော်တို့ နှေးကွေးသည်ထက် နှေးကွေးယုတ်လျော့လာမှာပါ။
အဓိကအားဖြင့်ပြောရင် ကျနော်တို့ သိမြင်ခွင့်ရတဲ့ ခေတ်မှာ ပညာရေးပိုင်းဟာ သိသိသာသာ ထိုးကျခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့တွေ လူချင်းတူရဲ့နဲ့ သူများနိုင်ငံတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုတွေ ခံနေရတယ်။ ဒါက အတတ် ပညာ ပိုင်းတင်ပြောတာပါ။ အသိ ပညာအတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ခေတ်ဟာ တကယ့်ကို ကံဆိုး မိုးမှောင်ကျတဲ့ခေတ်ကြီးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာပညာရေးစနစ်ကို အဓိကဗဟိုပြုတဲ့ အထွေထွေဆုတ် ယုတ်မှုကြီးရဲ့ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ ရလာဒ်တွေပါ။ စာရိတ္တ ဆိုရင်လည်း မကြုံစဖူးကျိုးကြေပျက်စီး ကုန်ကြပြီ။
၈ ရက်၊ ၈ လ၊ ၈၈ ဆိုတာကို လူငယ်တွေ ဘာမှန်းတောင် မသိကြဘူး။ အာဏာရှင်တွေဘက်ကလည်း ရည် ရွယ်ချက် ကြီးကြီးနဲ့ သမိုင်းအဆက်ဆက်ကို ဖြတ်တောက်ပစ်နေခဲ့တာ ခုဆို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတာ တောင် ဒဏ္ဍာရီလိုဖြစ်နေရပြီ မဟုတ်လား။
အကြံပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ ကျောင်းသားလူငယ် မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ အသိပညာ ငတ်မွတ်မှု၊ ယုံမှား သံသယ၊ ဆာလောင်မှုနဲ့ ချင်ခြင်း အကြိုက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ နီးစပ်တွေ့မြင်နိုင်အောင် ညီညွတ်စွာ ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦး
လူဟောင်းတွေကတော့ ရှစ်လေးလုံးနေ့ကျရင် အနက်ရောင်ဝတ်တာတို့ ဘုရားသွားပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ် လုပ်တာတို့ လုပ်ကြမှာပါ။ ကျမတို့ကတော့ ဆွမ်းကပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ တခြားတော့ ဘာမှလုပ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ လူတွေမှာက စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာနဲ့ အဲဒီဘက်ကို စိတ်မရောက်နိုင်ပါဘူး … အိမ်ရှေ့ ၇ အိမ်၊ အိမ်နောက် ၇ အိမ်ကို မနည်းလှုံ့ဆော်ရမယ့် သဘောမှာရှိတယ်။ ရှစ်လေးလုံးနေ့ကိုတောင် မှတ်မိကြတာ မဟုတ်ဘူး။ လုံခြုံရေးတွေ အရမ်းချထားလို့သာ ဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့် … သြော်ဟုတ်သားပဲ အနှစ် ၂၀ တောင်ပြည့်ပြီလို့ သိကုန်ကြတာ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို အနက်ရောင်မဝတ်ရန် စစ်အစိုးရပိတ်ပင်
ကြည်ဝေ/ရန်ကုန် | သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရသည် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များကို အနက်ရောင် အင်္ကျီ၊ လုံချည် ၀တ်ဆင်ခြင်းမပြုရဟု အမ်ိန့်ထုတ်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအနေနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အနက်ရောင် မ၀တ်ဆင်ကြရန် ပြောဆိုတား မြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်လာသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို စာသင်ခန်း အတွင်းသို့ ၀င်ခွင့်မပေးရန် ပြောဆိုရမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း တက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀န်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကုလကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒီချုပ် တွေ့ဆုံ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ 06 2008 21:06 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိနေသည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များနှင့် ယနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြရိပ်ညို ဟိုတယ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ် အိုဟေးကွင်တန်နာနှင့် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဦးလွင်၊ ဦးညွန့်ဝေနှင့် ဦးသန်းထွန်းတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
“ဟုတ်တယ်။ တချက်ခွဲလောက်မှာ တွေ့တယ်။ ခပ်တိုတို ပြောရရင် သူက အားလုံးကို တပြိုင်နက် တွေ့ချင်တဲ့ သဘောလေ။ တစည (တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ) က လူတယောက်က ပြောတယ်၊ မလွယ်ဘူးပေါ့။ အဲဒါနဲ့ တဖွဲ့စီ၊ တလှည့်စီ သီးသန့် ၁၅ မိနစ် တွေ့ဆုံခဲ့တယ်” ဟု အန်အယ်ဒီ အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်က ပြောသည်။
ကုလ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံရာတွင် အန်အယ်ဒီက ပြည်လုံးကျွတ် လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲအကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး၊ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့တွင် စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားသော ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စွမ်းအားရှင်များက ပါတီဝင်များကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသည်များကို တင်ပြခဲ့ကြောင်း ပါတီ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
မစ္စတာ တောမတ်စ်သည် ယခုလ ၄ ရက်နေ့တွင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လေဘေးသင့် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ယမန်နေ့ကလည်း အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်သို့ နှစ်ရှည် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် (ဟံသာဝတီ)၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့် မစုစုနွေးတို့ အပါအဝင် အခြား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂ ဦးနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
မစ္စတာ တောမတ်စ် အိုဟေး ကွင်တန်နာသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလတွင် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာကာ ၂ဝ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်မတိုင်မီ သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ခရီးစဉ်ကို အဆုံးသတ်မည် ဖြစ်သည်။
“ဒီလိုအမိန့်မျိုးကို ဘယ်တုန်းကမှ စာထုတ်ပြီး မပြောဘူး။ ပါချုပ်တွေကနေ ဋ္ဌာနမှူးတွေ၊ ဋ္ဌာနမှူးတွေကနေ ပါမောက္ခတွေ နောက် ကထိကတွေအထိ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့်ပြောပြီး အမိန့်ထုတ်သွားတာပဲ” ဟု စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခတဦးက ပြောသည်။
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်ခြင်းကို တားမြစ်သည့်ပြင် ဆရာ၊ ဆရာမများကို ဋ္ဌာနအလိုက် အသီးသီး စောင့်ကြည့်ခိုင်းလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ယနေ့နံနက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်ပြီးကျောင်းတက်လာသည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တချို့ရှိသည်ဟု သိရပြီး ဆရာဆရာမများက စာသင်ဆောင်ထိပ်မှ အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်လာသူများကို ကျောင်းခန်းထဲ ပေးမ၀င်ဘဲ အိမ်ပြန်ပြီး အဝတ်လဲခိုင်းကာ အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်ထားသော ကျောင်းသူကျောင်းသား တချို့မှာ စာသင်ခန်း ထဲ ပေးမ၀င်သောကြောင့် ကျောင်း စားသောက်ဆိုင်များတွင်သာ ထိုင်နေကြကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တဦးက ပြောသည်။
“မနက်ပိုင်း ကျူတိုရီယယ်ရှိလို့ပါလို့ ပြောတာတောင် မရဘူး။ ဆရာမတွေက အတင်းပဲ အိမ်ပြန်ပြီး အင်္ကျီလဲခိုင်းလို့ ပြန်ခဲ့ရ တယ်” ဟု သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ သချာင်္ ဘာသာရပ် အဓိကယူသော ကျောင်းသူ တဦးက ပြောပြသည်။
ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ယခုကဲ့သို့ အနက်ရောင်မ၀တ်ဆင်ရဟု တားမြစ်ခြင်းမှာ ၈ လေးလုံး အနက်ရောင် လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်မည်စိုးသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မကျေနပ်လို့ တမင်တကာကို အနက်ရောင် ၀တ်ပြီး လမ်း ထွက်တာပါ။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ တခုပေါ့။ မကျေနပ်တာကိုတော့ မကျေနပ်ကြောင်း ပြရမှာပဲ။ အင်္ကျီအနက်ရောင် ၀တ်လို့ ဖမ်းမယ်ဆိုရင် လည်း ခံရုံပဲ” ဟု အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်၍ ကျောင်းတက်လာသူ အသက် ၂၀ အရွယ် ကျောင်းသူ တဦးက ပြောသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး အနက်ရောင် လှုပ်ရှားမှုကို အားပေး ထောက်ခံသူတဦး ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းပြီးသည့် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ၃၀ ရက်နေ့ များတွင်လည်း ဆူးလေစေတီ တဝိုက်၌ အင်္ကျီ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အ၀ါရောင် ၀တ်ဆင်သူ လူငယ်များကို ဘတ်စ်ကားပေါ်မှ ဆင်းဆင်းခြင်း ရှာဖွေ၊ စစ်မေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်း စက်တင်ဘာလက အနက်ရောင်အင်္ကျီကို ကျောင်းသားကိုယ်စားပြုလူငယ်များက ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြပြီး အနီရောင်နှင့် အ၀ါရောင်ကို အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်များနှင့် သံဃာတော်များအား ထောက်ခံသူတို့ ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်သစ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံ
ကိုစိုး | သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်သစ် မစ္စတာ တောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တာနာသည် ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်၍ ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅ ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာန ကပြောသည်။
မစ္စတာ တောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တာနာသည် စစ်အစိုးရက ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် ချမှတ်ထားသော အသက် ၇၈ နှစ်ရှိ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် အပါအ၀င်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်း စု အဖွဲ့မှ ဦးဆောင် သံဃာတော် အရှင်ဂန္ဘီရ၊ လူ့ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးတို့နှင့် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း၌ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအေးဝင်း က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ယမန်နှစ်က ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်စင်တာတွင်ပြုလုပ်သည့် အလုပ်သမားနေ့ ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သော ကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကိုသူရိန်အောင်နှင့် ကိုကျော်ကျော် တို့ကိုလည်း အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်သစ်က တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ဦးအေးဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း(AAPP) ကမူ ကြာသပတေး နေ့တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည့် ၎င်း၏ ၄ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း မစ္စတာ ကင်တာနာ အနေနှင့် စစ်အစိုးရ က မတရား ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်ထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၅၂ ဦးကျော် ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်။
ယင်း AAPP အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်က မစ္စတာ ကင်တာနာသည် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် တွေ့ဆုံသင့်သည်ဟု ပြောဆိုလိုက်ပြီး“မစ္စတာ ကင်တာနာကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အဖွဲ့ တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့လည်း ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနေ နေရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်နေကြပါတယ်”ဟု လည်း ပြောသည်။
ဦးတိတ်နိုင် က ဆက်လက်ပြီး“သူ့အနေနဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ ဘယ်လောက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာ အရေးကြီး ပါတယ်”ဟု လည်း ပြောဆိုသည်။
မစ္စတာ ကင်တာနာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တနင်္ဂနွေနေ့က ရောက်ရှိပြီး စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအပါအ၀င် နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယက အဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့၊ နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့တချို့တို့နှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး နောက် ယမန်နေ့က နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် သို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် ရောက်ရှိသည့် သတင်းအား စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ယနေ့အထိ ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရှိရပေ။
အိုလံပစ်ပွဲတော်မတိုင်မီ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ ပြောင်းလဲရန် တရုတ်ကို တိုက်တွန်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ 06 2008 12:42 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ဘေးဒုက္ခ ကြုံတွေ့နေရသော အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ရေးအတွက် မြန်မာ စစ်အစိုးရအပေါ် မိမိ၏ သြဇာကို အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တရုတ်နိုင်ငံအား တောင်းဆိုလိုက်ကြသည်။ ဤပန်ကြားချက်ကို မြန်မာ့တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ အုပ်စုများက နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံ အားပေးသူများနှင့်အတူ ပန်ကြား တောင်းဆိုလိုက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများနှင့် နိုင်ငံတကာ ကင်ပိန်း လှုပ်ရှားသူများ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ပေါင်း ၅ဝ ကျော်က နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ရပ်တည်ပါရန်၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာပြည်၏ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးပါရန် တနင်္လာနေ့က ပူးတွဲ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြန်မာ့အရေးကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သည့် ထူးခြားသည့် အနေအထား တရုတ်ပြည်တွင် ရှိနေသည်” ဟု အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အကြီးကျယ်ဆုံး ဒီမိုကရေစီရေး ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုကြီး ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်မှာ နှစ် ၂ဝ ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာပြည်သူများသည် စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုကို ခံနေရဆဲ ဖြစ်သည်။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်သည့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် နိုင်ငံတကာ၏ ကြိုးပန်းမှု အားလုံးသည်လည်း မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
“ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ၏ တောင်းဆိုမှု မှန်သမျှသည် လက်နက် တင်ပို့ရောင်းဝယ်မှု ပိတ်ဆို့ရေး၊ အသေအချာ ချိန်ရွယ် ပြုလုပ်သည့် ဘဏ္ဍာရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတို့ ကဲ့သို့သော အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများ တပါတည်း လိုက်ပါလာမှ ရလိမ့်မည်” ဟု ကြေညာချက်တွင် ဆိုထားပါသည်။
ယခုအချိန်သည် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် မြန်မာ စစ်အစိုးရကို အချိန်ဇယား သတ်မှတ်ပေးရန် အချိန်အခါကောင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ပြည်ပရောက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သော ကိုစိုးအောင် က ပြောကြားသွားခဲ့ပါ သည်။
“ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဘို့ မြန်မာအစိုးရကို အချိန်ဇယား သတ်မှတ်ပေးမှ ရမယ်၊ ဒီလို မဟုတ်ရင် အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ကိုစိုးအောင်က ပြောသွားပါသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့က ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားများ ဦးဆောင်သော တပြည်လုံးအနှံ့ ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲများ၏ သမိုင်းဝင် နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီး၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ မတိုင်ခင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ဤကြေညာချက်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေနှင့် ယင်း၏ ဒေသတွင်း ရိုက်ခတ် သက်ရောက်မှုသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတဲက ပိုမို ဆိုးရွားလာခဲ့သည် ဟု ဆိုထားပါသည်။
နိုင်ငံ၏ များပြားလှသော ဓါတ်ငွေ့သိုက်များမှ ရရှိသည့် သန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ ရှိသော ဒေါ်လာများဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရသည် တရုတ်၊ ရုရှ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှ လက်နက်များ ဝယ်ယူပြီး ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်မှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဤအဖွဲ့များက ပြောကြား လိုက်ကြပါသည်။
စစ်အစိုးရ၏ မမှန်ကန်သော အုပ်စိုးမှုကြောင့် နေရာ ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ် ရောင်းဝယ်မှုများနှင့် အခြား ဒေသတွင်း လူသားလုံခြုံမှုကို ခြိမ်းခြောက်မှုများကို တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် တနှစ်တည်းတွင် စစ်အစိုးရက တိုးမြှင့် ပြုလုပ်လာခဲ့သော ထိုးစစ်ကြောင့် ထိုင်းနယ်စပ်နှင့် ကပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသတွင် ပြည်သူ ၇၆ဝဝဝ ဦး နေရာရွှေ့ပြောင်း ခံခဲ့ရသည် ဟု ကြေညာချက်တွင် ဆိုထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အကြီးဆုံး လူထုဆန္ဒပြ အုံကြွမှုကြီး အနှစ် ၂ဝ ပြည့်မြောက်သည့် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့သည် ဘေဂျင်း အိုလံပစ်ပွဲတော် စတင်မည့် နေ့ရက်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် စိတ်ဓါတ်နှင့်အညီ တရုတ်ပြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံ အားပေးနေမှုများ ရပ်တန့်သင့်သည်ဟုလည်း ကင်ပိန်း လှုပ်ရှားသူများက ပြောကြားကြပါသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ၌ မြန်မာနိုင်ငံအား အကာအကွယ် ပေးနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရမည်” ဟု ဤပူးတွဲ ကြေညာချက်က ဆက်လက် ပြောဆိုထားပါသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာ၌ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အချိန်ဆွဲသည့် နည်းဗျူဟာကို ကျင့်သုံးနေသည်၊ တရုတ်နှင့် ရုရှက သူတို့ နောက်တွင် ရှိနေပြီး သူတို့ကို မလွဲမသွေ ထောက်ခံလိမ့်မည်ကို သိနေသောကြောင့် ဤသို့ လုပ်ရဲခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ကိုစိုးအောင်က ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် ဗီတိုအာဏာ ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံဖြစ်သော တရုတ်နှင့် ရုရှက အမေရိကန်နိုင်ငံက ဦးဆောင်တင်သွင်းပြီး ယူကေနိုင်ငံနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့က ထောက်ခံခဲ့သည့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုပြုချက် မူကြမ်းကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် ဗီတိုအာဏာသုံး၍ တားဆီး ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။
“တရုတ်နှင့် ရုရှတို့၏ ဤသို့ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ထောက်ခံ အားပေးမှုသည် မြန်မာပြည်သူတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ပိုမို နက်ရှိုင်းစေခဲ့သည်၊ တိုင်းပြည်၏ လုံခြုံရေးကို သာမက ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကိုပါ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်” ဟု ကိုစိုးအောင်က ပြောသွားပါသည်။
တရုတ်နှင့် ရုရှတို့ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စစ်အစိုးရအပေါ် ရှိနေသည့် သြဇာကို အသုံးချကာ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရကို ပြောဆိုသင့်သည်ဟုလည်း ကိုစိုးအောင်က ဆက်လက် ပြောကြားသွားပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တရုတ်နှင့်ရုရှ နှစ်နိုင်ငံသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ရှားရှားပါးပါး မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ဖြစ်နေကြပြီး စစ်အစိုးရ ကလည်း ဤနိုင်ငံများကို တိုင်းပြည်တွင်းတွင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ လာရောက် လုပ်လိုစေသည် သာမက အဆိုပါ နိုင်ငံများကလည်း စစ်အစိုးရကို လက်နက်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ နည်းပညာ သင်တန်းများ ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်လျက် ရှိကြသည်။
ထိုအတောအတွင်း မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေး ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (Free Burma Coalition-Philippines) က တရုတ်ပြည်သည် မိမိ၏ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းများကို တိုးတက် ကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်ပါမည် ဟူသော ပေးထားခဲ့သည့် ကတိစကားနှင့်အညီ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မိမိ၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကို ပြောင်းလဲရန် လိုသည်ဟု အင်္ဂါနေ့က သတိပေး ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
“မိမိတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းများကို တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပါမယ်လို့ တရုတ်အစိုးရက ပေးထားတဲ့ ကတိ စကားဟာ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒနဲ့လည်း သက်ဆိုင်သင့်တယ်၊ အထူးသဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အနှံ့အပြား ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကို ပြောင်းလဲဘို့ လိုတယ်” ဟု အဆိုပါအုပ်စု (FBC-Phils) က ပြောကြားသွားပါသည်။
အိုလံပစ်ပွဲတော်၏ ရည်ရွယ်ချက် တခုမှာ ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ တပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရေး၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေရေး၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းရေးတို့ ဖြစ်သောကြောင့် တရုတ် အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော မူဝါဒကိုလည်း အထက်ပါ မူဝါဒများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်သင့်သည် ဟု (FBC-Phils) က ဆိုသွားပါသည်။
“အိုလံပစ်ပွဲတော် စတင်ဘို့ ရက်အနည်းငယ်သာ လိုတော့တဲ့ ခုလိုအချိန်မှာ တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာ ပြည်သူများအတွက် လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးတည်း ဟူသော နောက်ထပ် မီးရှူးတိုင်ကိုလည်း သယ်ဆောင်ဘို့ လိုသည် ဆိုသည်ကို နားလည် သဘောပေါက် လာလိမ့်မည်ဟု မိမိတို့ မျှော်လင့်ပါသည်” ဟု (FBC-Phils) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ (Egoy Bans) က ကြေညာချက်တွင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
“ဤသို့သာ ဖြစ်လာခဲ့မည်ဆိုလျှင် ပီကင်း အိုလံပစ်ပွဲတော်သည် မြန်မာပြည်သူများအတွက် သာမက၊ တရုတ်ပြည်ကြီး နှင့် တကမ္ဘာလုံးအတွက် အောင်မြင်မှုများကို သယ်ဆောင်လာပါလိမ့်မည်။ ဒီကိစ္စဟာ အိုလံပစ် ပွဲတော်မှာရရှိတဲ့ ရွှေတံဆိပ် အရေအတွက်ထက် ပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ်၊ မနှိုင်းယှဉ်သာအောင်ပါဘဲ” ဟု Egoy Bans က ပြောသွားပါသည်။
NEJ/ ၆ သြဂုတ် ၂၀၀၈
နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားစေလွှတ်မည့် ၀န်ထမ်းများကို တိုက်ရိုက် မလွှတ်တော့ဘဲ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့မှ ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ရမှ စေလွှတ်သည်ဟု နေပြည်တော်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
အစောပိုင်းက ဆေးစစ်ချက် အောင်ဖို့ စစ်ဆေးရသည့် အဆင့်သာရှိပြီး ယခု စစ်ထောက်လှမ်း ရေးအဖွဲ့မှ ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ရမှ နိုင်ငံခြား မြန်မာသံရုံးများကို စေလွှတ်မည့် သဘောဖြစ်သည်ဟု သံတမန်တဦးက ရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံခြားမြန်မာသံရုံးများမှ သံတမန်အရာရှိများ မြန်မာပြည်ပြန်ကာနီး သံရုံးမှ ထွက်ပြေးသည့် ဖြစ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်အပြီး ယခုကဲ့သို့ အာဏာပိုင်များက တင်းကျပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံခြားသွားရန် နှစ်အတန်ကြာစောင့်ရသည့် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းအများစုမှာ နိုင်ငံခြား မြန်မာ သံရုံးများ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်း နည်းသည့်အတွက် အတော်များများ အလုပ်က နုတ်ထွက်ကုန်သည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
ုမြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိနေသည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ် အိုဟေး ကွင်တန်နာသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ခေါင်းဆောင် (၃) ဦးနှင့် ယနေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီိခန့်က မြရိပ်ညိုဟိုတယ်၌ တွေ့ဆုံပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသည့်ကိစ္စများ တင်ပြနိုင်ခဲ့သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးလွင်၊ ဦးညွန့်ဝေနှင့် ဦးသန်းထွန်းတို့ သွားရောက်တွေ့ ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေမှာ ကျန်းမာရေးကြောင့် မသွားဖြစ်ဟု သိရသည်။ အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် ကုလလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် တွေ့ရာတွင် သီးခြားတွေ့ခွင့်မရဘဲ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စုပေါင်းတွေ့ဆုံခဲ့ရကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလွင်က ပြောသည်။
၎င်းက “ပါတီစုံပေါ့။ ကိုယ့်အလှည့်နဲ့ကိုယ် ပြောရတာပေါ့။ လိုရင်းပြောရတာ အချိန် (၁၅) မိနစ်လောက်ရတာ။ ထုတ်ထားတဲ့ ကြေညာချက်တွေအတိုင်းပဲပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တာ လည်းပါတယ်။ တွေ့တာတော့ တစညတင်မကဘူး။ ပအို့ဝ်ရော၊ ၈၈ ကျောင်းသားရောပါတယ်။ သူပြောတာတွေ နားထောင်ရတာပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ၌ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိစ္စ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖမ်းဆီးခံနေရသည့်ကိစ္စ၊ အဖွဲ့ချုပ်
ရုံးရှေ့၌ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရသည့်ကိစ္စနှင့် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်ခံရသည့် ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ အန်အယ်လ်ဒီက တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တောမတ်စ် အိုဟေး ကွင်တန်နာသည် ခရီးစဉ်အတွင်း ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဧရာဝတီ လေဘေးဒုက္ခသည်များကို တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယမန်နေ့ကလည်း အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်သို့၌ နှစ်ရှည် အကျဉ်းသား သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ စက်တင်ဘာသံဃာ့အရေးအခင်း ဦးဆောင် လှုပ်ရှားသူ အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့် စုစုနွေးတို့အပါဝင် အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့တို့ကို တွေ့ ဆုံခဲ့သည်။ ။
ပီတာအောင်/ ၆ သြဂုတ် ၂၀၀၈
ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အာဆီယံပဋိညာဉ် စာချုပ်ကို ကြိုဆိုသော်လည်း အာဏာသိမ်းထားသည့် နအဖစစ်အစိုးရက လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်းကို လက်မခံကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ ဒီမိုကရေစီအစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ အာဏာ သိမ်းထားကြောင်း၊ တရားဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိနေသော်လည်း နအဖ စစ်အစိုးရက အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးခွင့် ရခဲ့ကြောင်း အန်အယ်လ် ဒီ၏ ယမန်နေ့ ထုတ်ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက “ကျနော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေ ရှိနေတယ်၊ လွှတ်တော်မခေါ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အာဏာပိုင်တွေက လက်မှတ်ထိုးဖို့ အခွင့်အ ရေးရသွားတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ မထောက်ခံဘူး။ ဒီဥစ္စာကို နည်းလမ်းမကျဘူးလို့ ယူဆ တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အခြေခံအခွင့် အရေးများကို လေးစားလိုက်နာရေး စသည့် ပဋိညာဉ်ပါ တန်ဖိုးများအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် အာဆီယံတွင် တာဝန်ရှိနေသည်ဟုလည်း အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။
အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ဇူလိုင် (၂၁) ရက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး များအစည်းအဝေးပွဲ၌ သဘောတူကြောင်း အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်း မြေပြိုမှုကြောင့် လူ (၁၆) ဦးထက်မနည်း သေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသတွင် ဇူလိုင် (၃၀) ရက်၌ မြေပြိုမှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ (၁၆) ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ပျောက်ဆုံးသူများအား ဆက်လက်ရှာဖွေမှု မလုပ်တော့ ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်း မြေပြိုမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ (၂၀) ခန့် သေဆုံးသည်ဟု
ရန်ကုန် Reuters သတင်းက ရေးသည်။ သို့သော် ထိုသတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာများက ယခုထိ ဖော်ပြခြင်း မရှိသည့်အတွက် အမှန်တကယ် သေဆုံးသူဦးရေကို သိနိုင်ရန် ခက်ခဲနေသည်။
ဖားကန့်မြို့အနီးရှိ မှော်စီဇာကျောက်စိမ်းတွင်းရှိ ကျောက်စိမ်းတောင်ကုမ္ပဏီမှ စွန့်ပစ်ထားသော မြေစာပုံတွင် ဒေသခံ လက်လုပ်လက်စားများက ရွှေရှာဖွေနေစဉ် မြေမြိုကျလာကာ မြေပိသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မျက်မြင်သေများကို ကိုးကားပြီး ဖားကန့်ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ညနေ (၃) နာရီလောက်မှာ၊ မိုးရွာပြီးစအချိန်လည်းဖြစ်နေတာ။ မြေစာပုံက အမြင့်ကြီး၊ တောင်လိုဖြစ်နေတာ။ ဒီမှာရှိတဲ့ လက်လုပ်လက်စားတွေပေါ့၊ သူတို့တွေက အဲဒီမြေစာပုံအောက် ခြေမှာ ရွှေကျင်တာ၊ ကျောက်ရှာတာတွေ လုပ်နေတာ။ လူ သုံးလေးဆယ်တောင် မကဘူးတဲ့။ မြေပြိုတော့ လမ်းဘေးချောက်ထဲကို ရိုက်ချပြီး ဖုံးသွားတာ။ အချို့တော့ လွတ်သွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း (၁၆) ဦးကို အခင်းဖြစ်သည့်နေ့နှင့် နောက်တနေ့တွင် တူးဖော်ရှာဖွေနိုင် ခဲ့သော်လည်း နောက်နေ့များတွင် ဆက်လက်ရှာဖွေမှုများကို အနည်းကျဉ်းသာ လုပ်နေရာမှ ယခုအခါ လုံးဝမလုပ်တော့ဘဲ ပစ်ထားလိုက်သည်ဟု အဆိုပါဒေသခံက ပြောသည်။
၎င်းက “နောက်ရက်တွေကျတော့ မီးသတ်က (၅) ယောက်လောက်နဲ့ ရေပိုက်ထိုးပြီး ဖြစ်သလို လုပ်နေသေးတယ်။ အခုတော့ ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ လမ်းဘေး ချောက်ထဲအထိပဲ မြေစာတွေက အတော်လေးများတယ်။ မြေတွေကလည်း ဆက်ပြီးပြိုနေတော့ ပစ်ထားလိုက်တာ” ဟု ပြောသည်။
ကျောက်စိမ်းထွက်ရှိရာ ဖားကန့်၊ တာမခံဒေသတွင် ယခုကဲ့သို့ မြေပြိုမှု၊ စက်လှေနစ်မြုပ်သေဆုံးမှု စသည့် လူအများအပြား သေဆုံးသည့်ဖြစ်ရပ်များ မကြာခဏရှိနေပြီး သေစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် အရေးတယူ ကောက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြောင်း အဆိုပါဒေသခံက ပြောသည်။
၎င်းက “ဥရုချောင်းထဲမှာ အလောင်းတွေ မျောနေတာ မကြာမကြာ တွေ့ရတယ်။ ဘယ်သူမှ အရေး တယူ လုပ်မနေဘူး။ လမ်းဘေးမှာလည်း ဆေးသမားတွေ၊ ဘိန်းစားတွေ လဲသေနေတာလည်း ဒီလိုပဲ။ မနေနိုင်တဲ့သူကသာ သွားမြှုပ်လိုက်တာ။ ဘယ်ကလဲဆိုပြီး စုံစမ်းရင်တောင် ခက်တယ်။ ဒီမှာက နယ်စုံက လူတွေချည်းပဲ” ဟု ပြောသည်။ ။
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်များ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
မူဆယ်-ကျယ်ဂေါင်ဖြတ်သန်းရာ အလယ်ပေါက်ဂိတ် (ခ) ပင်မဂိတ်ကြီး
ပီကင်းအိုလံပစ်ပွဲတော်ကာလ တရုတ်ပြည်၌ မငြိမ်မသက်မှုနှင့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ တားဆီးနိုင်ရန် တရုတ်အစိုးရက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြင့် နိုင်ငံတ၀န်း စောင့်ကြပ်လျက်ရှိရာ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်များမှာ တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ တိုးမြှင့်ချထားကာ အစစ် အဆေးများ အထူးဆောင်ရွက်နေသည်။
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် အဓိက အ၀င်အထွက်ဖြစ်သည့် မူဆယ်-ကျယ်ဂေါင်မြို့ အကြား ကူးသန်းရာ ဂိတ်ပေါက်ကြီးများဖြစ်သည့် မန်ဝိန်းဂိတ်၊ ပင်မဂိတ်ကြီးနှင့် ဆင်ဖြူဂိတ် တို့တွင် အစစ်အဆေးများကို လူနှင့်တမျိုး၊ စက်ကိရိ ယာများနှင့်တဖုံ စစ်ဆေးနေသည်ဟု နှစ်နိုင်ငံ အကြား နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေသည့် ဈေးသည်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အမျိုးသမီးတွေကိုဆိုရင် တရုတ်ရဲမေတွေက စစ်တာ။ အမျိုးသားကိုတော့ တရုတ်ရဲတွေက စစ်တာ။ အိတ်တွေ၊ ခြင်းတွေကိုလည်း လူနဲ့အတူ သေတ္တာလို စက်ရှေ့မှာ ဖြတ်လျှောက်၊ ကွန်ပျူ တာကနေ တဖက်ကကြည့်နေတာ၊ အဲလိုမျိုး။ ကျယ်ဂေါင်ကနေ ရွှေလီ ကားစီးလာရင်လည်း လူတိုင်းကားပေါ်က ဆင်း၊ အဲလို စက်ရှေ့မှာ ဖြတ်လျှောက်ခိုင်းတယ်။ မသင်္ကာရင် မေးမြန်းတာ တွေ လုပ်တယ်။ နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်တွေ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လက်မှတ်တွေ စစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းလားမြို့နှင့် တရုတ်ပြည် တာလောမြို့အကြား ဖြတ်သန်း သွားလာခွင့် ကိုလည်း ပိတ်ပင်ထားပြီး အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်စရာ လုပ်ငန်းပြနိုင်မှသာ ၀င်ခွင့်ပြုသည်ဟု မိုင်းလားဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ မိုင်းလားတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ ၀နယ်က မိုင်းပေါက်တို့၊ ကိုးကန့်နယ်က ချင်းရွှေဟော်တို့ဘက်မှာလည်း ဒီလိုပဲတဲ့။ တရုတ်ဘက်က အ၀င်အထွက်တွေ ကန့်သတ်ထား တယ်။ ရက်တော်တော်လေးတောင် ကြာလာပြီ။ အိုလံပစ်ပြီးမှပဲ ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရ တာပဲ” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ရှိ တရုတ်မြို့များအကြား သွားသည့် ကားလမ်းတလျှောက်တွင်လည်း စစ်ဆေးရေးဂိတ် အများအပြားချထားပြီး အစစ်အဆေးများ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပြုလုပ်နေ သည်ဟု မြန်မာကျောက်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ရွှေလီနဲ့ ထိန်ချုံးအကြား ဂိတ် (၆) ခုလောက်ရှိတယ်။ ဒီရွှေလီက အထွက်ဆိုရင် ရဲနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေက စစစ်နေပြီ။ အရင်က ရွှေလီနဲ့ ရင်ကျန်မြို့အကြားမှာ ဘာဂိတ်မှမရှိဘူး။ အခု တလမ်းလုံးစစ်တာ။ လူများများပါတဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေဆို တနေရာ၊ တနေရာ အနည်းဆုံး (၁၅) မိနစ်လောက် အချိန်ကြန့်ကြာတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းက ယူနန်ပြည်နယ်မြို့တော်၊ ကူမင်းမြို့တွင် ဘတ်စ်ကားပေါ်၌ ဗုံးများ ပေါက်ကွဲပြီး နောက်ပိုင်းမှစ၍ နယ်စပ်ရှိမြို့များတွင် တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ခြေလျင် ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကားများဖြင့်လည်းကောင်း ပတ်တရောင် လှည့်လည်မှုများ လုပ်လာနေသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ ။
ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဒေသခံ အန်ဂျီအိုများအတွင်း ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်များ ၀င်ရောက်ရန် အားထုတ်
မင်းနိုင်သူ/ ၆ သြဂုတ် ၂၀၀၈
မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ လမ်းအချို့ကို ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်နေကြရပြီး ထိုကဲ့သို့ ပြုပြင်ပေးနေ ကြသည့် အဖွဲ့များအတွင်းသို့ ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်များက အတင်းဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း မုံရွာဒေသခံများက ပြောသည်။
မုံရွာလယ်တီကျောင်းတိုက်မှ သံဃာတော်တပါးက “ ကျောင်းရှေ့က လယ်တီနဲ့ ရတနာပုံရပ်ကွက် ကို ဆက်သွယ်တဲ့ မြေသားလမ်းကို နှစ်တိုင်းပဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြင်နေကြရတယ်။ ရပ်ကွက်က လူတွေနဲ့ ကော်မတီလေးဖွဲ့ပြီး ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ ယာဉ်တွေက စေတနာရှိသလောက်
ထည့်ဝင်တဲ့ အလှူငွေနဲ့ လမ်းကို ပြင်ကြရတာပါ၊ အခု ကြံ့ဖွံ့ဝင်တွေက သူတို့ပါ ကော်မတီထဲပါ မယ်ဆိုတော့ အလှူရှင်တောင် ရှိပါတော့မလားမသိဘူး။ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကော်မတီဝင် တွေလည်း စိတ်ပျက်နေကြရတာပေါ့” ဟု ဆက်သွယ်မိန့်ကြားသည်။
အဆိုပါ လယ်တီ-ရတနာပုံလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်ကာ မိုးတွင်းပိုင်းတွင် လမ်းများပျက်စီးမှု များသဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်နေကြရသည်မှာ (၅) နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကိုက် (၆၀၀) ကျော် ရှည်လျားသည့် ယင်းလမ်းအား နှစ်စဉ်မြေသားဖို့ခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးနေရသည်ဟု လမ်းကော်မတီဝင်များက ပြောသည်။
မုံရွာမြို့ရှိ အခြားလမ်းများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်များအလိုက် ကော်မတီများဖွဲ့၍ ကိုယ် ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်နေကြရပြီး ယခုအခါ ယင်းကော်မတီများအတွင်းသို့ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်များက ၀င်
ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိနေသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း နန္ဒ၀န်နှင့် စက်မှုကုန်သွားလမ်းမကြီးကို ပြုပြင်ပေးနေသည့် ထန်းတောရပ်ကွက်မှ ဦးချစ်လှက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ကော်မတီက အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်က ပွဲစားဦးဝ မတည်တဲ့ ငွေကျပ် (၁) သိန်းနဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေက စေတနာအလျောက် ထည့်ဝင်ငွေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်လောက်ကတည်းက စက်မှုကုန်သွားလမ်းကို ပြုပြင်ပေးနေကြတာ။ အခုကြံ့ဖွံ့က လူငယ်တွေလာပြီး ကော်မတီထဲကို သူတို့လည်းပါမယ် ပြောနေကြတယ်။ သူတို့သာပါရင်တော့ အလှူရှင် ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ သေချာတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တဦးက ၎င်းတို့အနေဖြင့် နှစ်စဉ်မြို့နယ်စည်ပင်သို့ ဘီးခွန်ပေးဆောင်ကြရ ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် စည်ပင်က လူကြီးအသွားအလာများသည့် လမ်းမကြီးများကိုသာ ပြုပြင် ကြောင်း၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လမ်းပြုပြင်ပေးနေသည့် ကော်မတီများကိုလည်း အလှူငွေ ထည့်ဝင်ဖြစ် သော်လည်း ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်များပါလာပါက ထည့်ဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုးရ လက်ကိုင်တုတ်အသင်းဖြစ်သည့် ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်များသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီး အန်ဂျီအိုအဖွဲ့ များ၏ လုပ်ငန်းများအား အသင့်လွှဲပြောင်းရယူခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည် လူသိများသော နှောင့်ယှက်မှုများမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်သူ၊ ဇာဂနာနှင့် စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင်တို့ ပါဝင်သော ရန်ကုန်နာရေးကူညီမှုအသင်းအား လွှဲပြောင်းရယူလိုမှုမှာ ထင်ရှားသည့်သာဓက ဖြစ်သည်။ ။
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် NLDနဲ့တွေ့
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်တော်သစ်ဖြစ်တဲ့ တိုမာ့စ် အိုဟဲယား ကင်တာနား ဟာ သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ် တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် နိုင်ငံရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း တချို့ကို တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလို တွေ့ဆုံတဲ့အထဲက အများစုဟာ မြန်မာ စစ်အစိုးရကို လိုလားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်နေတာ၊ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေကြသူတွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာတွေကြောင့် အားမလို အားမရ ဖြစ်နေတာတွေလည်း ရှိနေတာပါ။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြပေးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ရောက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် တိုမာ့စ် အိုဟဲယား ကင်တာနား (Tomas Ojea Quintana) က မြန်မာနိုင်ငံက အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီး တခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း တချို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာမှာ အထူးကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန် ကုလသမဂ္ဂရုံးရဲ့ ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဦးအေးဝင်းက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"ရန်ကုန်မှာပါပဲ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီရယ်၊ ၀ံသာနု NLD အဖွဲ့ရယ်၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖွဲ့ရယ်၊ 88 Generation Student Union of Myanmar။ ပအို့ဝ် အမျိုးသားအဖွဲ့ အဲဒါပါပဲခင်ဗျ။"
အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ဖက်က ပြောဆိုတင်ပြခဲ့တာတချို့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်း က ပြောပြပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ ပြောဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကတော့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဥပဒေအရ ပေးတဲ့ အယူခံ အခွင့်အရေးကို ငြင်းပယ်တဲ့ ကိစ္စကိုလည်း ပြောခဲ့တယ်။ နောက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဟာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ဟိုပုဒ်မ ဒီပုဒ်မနဲ့ အကျဉ်းချထားတဲ့ကြားထဲက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ ကိစ္စ၊ အဲဒါတွေကိုလည်း တင်ပြခဲ့တယ်။ နောက်တခုက ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မသမာတဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ပြောပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ သွားတာက ဦးလွင်ရယ်၊ ဦးညွန့်ဝေရယ်၊ CECအဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းထွန်းရယ်၊ နဂိုကတော့ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရွှေ သွားဖို့ပါ။ သို့သော်လည်း ဥက္ကဌက ဒီနေ့ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းတာနဲ့ မလိုက်ဖြစ်တာပါ။ ဒါကြောင့် သုံးယောက်ပဲ သွားပါတယ်။"
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေမှာ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အခွင့်မသာတဲ့အပြင် အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အချိန်တိုတိုသာ ရခဲ့တယ်လို့လည်း ဦးဥာဏ်ဝင်း က ဆိုပါတယ်။
"ဒီနေ့ မနက် ၁၀နာရီခွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ လူကြီးတွေကို သက်ဆိုင်ရာက လာခေါ်သွားပါတယ်။ မြရိပ်ညို ဟိုတယ်မှာ နေရာချထားတယ်။ ၁၀နာရီခွဲကသွားတာ ၁နာရီင်္ခွဲကျမှ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ကြီးနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတယ်။ တွေ့ခွင့်ရတဲ့ အချိန်က ၁၀မိနစ်ပဲရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက စီစဉ်ထားတာက NLD၊ တစည၊ နောက်နိုင်ငံရေး ပါတီမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေး အလုပ်လုပ်တဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ နာမည် တပ်ထားတာက ၀ံသာနုတို့၊ ၈၈မျိုးဆက်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတို့ အဲဒါမျိုးကလည်း လေးဖွဲ့လောက်ပါတယ်။ အားလုံး ခြောက်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒါကို တပြိုင်တည်း မစ္စတာ ကင်တားနားနဲ့ တွေ့ဖို့ စားပွဲတွေ၊ နေရာတွေ ဆင်ထားတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ မစ္စတာ ကင်တားနားက ဒီလို တွေ့တာထက် ကို တဖွဲ့ချင်းတွေ့တာက ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့မှ တဖွဲ့ချင်း ပြန်ပြီးတော့ တွေ့ရပါတယ်။ NLDက ပထမဆုံးတွေ့ရတယ်။ အားလုံးက ၁၀မိနစ်ဆီပဲ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်မရဘူး။ "
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာထက် မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေကသာ ပိုများနေတာပါ။ ဒီအတွက်ကြောင့် မို့လို့လည်း လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ မျှော်လင့်ထားကြတဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကြား စိတ်ပျက် လက်ပျက် ဖြစ်နေရတာ တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲက တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးေ ခါင်းဆောင်တဦဖြစ်တဲ့ ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျင့်ရှင်းထန် ကတော့ -
"ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့ အခြေအနေကို လာကြည့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့က အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ဖို့က အရေးအကြီုးဆုံးလို့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ မြင်ပါ တယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့က နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ အသင့်ပြင်ပြီးတော့ သူတို့ပြချင်တဲ့သူ၊ သူနဲ့ တွေ့စေချင်တဲ့သူ လောက်နဲ့ပဲ တွေ့တယ်ဆိုတော့ သူတာဝန်မကျေဘူးလို့ ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုပဲ ပြောချင်တယ်။"
ဒီလို လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံခွင့် ရမယ်၊ မရဘူး အခုအချိန်အထိ မသေမချာ ဖြစ်နေရတဲ့အထဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း တဦးအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဝေဖန်သံတွေ ကြားနေရတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန် ကုလသမဂ္ဂရုံး ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဦးအေးဝင်း ကို မေးကြည့်ပါသေးတယ်။
"လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ နိုင်ငံတော် အာဏာပိုင်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ အဆင်သင့်သလို ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ကိစ္စမှာ ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကို ကြိုမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ပြောခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။"
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်း ကတော့ အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်း သွားလာနေရတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလို ကောက်ချက်ချပါတယ်။
"ဒီနေ့ အစီအစဉ်တွေတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်နေ့ အစီအစဉ်တွေမှာလည်း တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ကြားတာတွေ ကလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ သူတို့ အစိုးရအတွက် ထောက်ခံပြောဆိုမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေက ပိုများမယ်၊ အသံပိုကျယ်မယ်၊ အသံများမယ်။ ဒါသေချာသလောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ထင်တာကတော့ အဲဒီလို အစိုးရကလည်း စီစဉ်တယ်တဲ့ သဘောလို့လည်း ထင်တယ်။"
လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ မနေ့တုန်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်ကို သွားရောက်ပြီး ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ သံဃာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေး အပါအ၀င် အကျဉ်းကျခံနေရသူ ၅ ယောက်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ နေပြည်တော်ကို သွားပြီးတော့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဦးမှာပါ။ ဒီနောက် မနက်ဖြန် ရောက်ရင်တော့ သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်အဆုံးသတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ ရှိပါတယ်။
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ ကူညီရေးပစ္စည်းများ ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိနေဆဲ
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3)
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် - နားဆင်ရန် (MP3) ပြည်တွင်းအလှူရှင်များလှူဒါန်းသော အ၀တ်အထည်များ လက်ခံရန် စောင့်ဆိုင်း နေသော မုန်တိုင်းဒုက္ခသည် ကလေးငယ်တဦး။ မေ ၁၇၊ ၂၀၀၈။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာနာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့တာ ၃ လ
ရှိလာခဲ့ပေမယ့် ကယ်ဆယ်ကူညီရေးပစ္စည်းတွေ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေ
ဆီ ရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့ အခက်အခဲတွေအခုထိ ရှိနေတုန်းပဲလို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်
က အင်္ဂါနေ့မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေမှာ နေထိုင်သူတွေအတွက် စားသောက်ရေးနဲ့ ရှင်သန်ရပ်
တည်ရေး အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ကူညီဖို့
ရန်ပုံငွေတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို
နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးဒဏ်ခံရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက အခြေအနေတွေဟာ ပြန်လည်
နာလန်ထူတဲ့ အစပိုင်းကာလကို ရောက်လာပြီလို့ မြန်မာ၊ အာဆီယံနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ
သုံးပွင့်ဆိုင် ဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာ
မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့က တနင်္လာနေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့ နယူးယောက်ခ် ကုလရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ကုလ
သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရ မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ် (Michèle Montas) က
ကယ်ဆယ်ကူညီရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် စိန်ခေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိနေ
"နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဒဏ် ခံထားရတာ ၃ လရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ
ကယ်ဆယ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ အများကြီးလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ ဒုက္ခသည်
တွေရှိတဲ့နေရာတွေကို ကယ်ဆယ်ကူညီရေးပစ္စည်းတွေ ပို့ပေးဖို့ လိုအပ်နေသေးတဲ့
အပြင် အခုကာလဟာ နာလန်ပြန်ထူလာတဲ့ အစောပိုင်းကာလလို့ ပြောပေမယ့်
ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲတွေက အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။"
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် ဒန်နီယယ်
ဘေကာစ်က မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေမှာ သိသိသာသာ တိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင်
လုပ်နိုင်တာဟာ ဒေသခံတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေက
စေတနာရှင်တွေရဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ပါလို့ ပြောပါတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ဒေသတွေက မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်း
ကျင်အခြေအနေဟာ အခုထိ ဆိုးဝါးနေဆဲဖြစ်တာမို့ ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက် အရေးပေါ်
လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အများကြီးလုပ်ရဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
ဒီဒေသတွေက စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် သိပ်ကိုအရေးကြီးနေပါတယ်လို့လည်း
အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရက ပြောပါတယ်။
"ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်က စိုက်ပျိုး
ရေးကဏ္ဍဟာ အဲဒီဒေသက ဒုက္ခသည် ၂.၄ သန်းအတွက် အစားအစာ ဖူလုံအောင်နဲ့
ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်ပေမယ့် ကူညီရေးရန်ပုံ
ငွေ ချထားပေးတာက အနည်းဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့
က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ရန်ပုံငွေချထားရေးမှာ ဒေါ်လာ ၅၁ သန်းဖိုး သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်
ဒါဟာလည်း လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပေးဖို့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။"
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာတင်မက ကျန်တဲ့ ကယ်ဆယ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့၊
နောက် နာလန်ထူတဲ့ အစောပိုင်းကာလအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့
အတွက် အလှူငွေတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုအချိန်
အထိ လှူဖို့လျာထားတဲ့ ငွေတွေထဲက ၄၁% ပဲ အလှူငွေရသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ အစားအစာ တန်ချိန်ပေါင်း ၂၅,၀၀၀ ကျော် မုန်တိုင်းသင့်ဒေသကို
ပေးပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဒုက္ခသည် ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါးအတွက်ပဲ ပေးနိုင်တာမို့ ဒုက္ခသည်
၉၀၀,၀၀၀ ကျော်အတွက် နောက်ထပ် ၉ လစာ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ စားနပ်
ရိက္ခာတွေပို့ပေးဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောကြားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဂျွန်ဟုမ်းစ်
(John Holmes) က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ငွေလဲနှုန်းပြဿနာကြောင့် ကုလ
သမဂ္ဂက သုံးစွဲခဲ့တဲ့ အလှူငွေတွေထဲက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖိုးလောက် ဆုံးရှုံး
ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောဆိုတာမို့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂက
ဆွေးနွေးမှုရှိမရှိ မေးမြန်းကြတဲ့အခါမှာတော့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ရှိပေမယ့် အခြေ
အနေဟာ အခုထိ အရင်အတိုင်းပဲ ရှိနေပါသေးတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်
ရဲ့ ပြောခွင့်ရက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် အင်းစိန်ထောင် လေ့လာ
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်တော်သစ်ဖြစ်
တဲ့ တိုးမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) ဟာ သူ့ရဲ့ ဒုတိယနေ့
ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဒီကနေ့မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများအပြားကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
ထားရာ ရန်ကုန်မြို့က အကျဉ်းထောင်ကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ
ပဲ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ရောက်
နေတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ်အနေနဲ့ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အကျဉ်းသားတွေ
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်သွားနိုင်ဖို့
တိုက်တွန်းပြောဆိုသံတွေကိုလည်း ကြားနေရပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တိုးမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားက
သူ့ရဲ့ ဒုတိယနေ့ခရီးစဉ် တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်နဲ့ အင်းစိန်ထောင်ကို သွားရောက်ခဲ့တာပါ။
နေ့လယ်ပိုင်းက သွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံဖွယ်ရာ
ရှိတယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ရပေမယ့် ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေ ပါဝင်မယ်ဆိုတာတော့ မသိရ
သေးဘူးလို့ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ကို ဒီကနေ့ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
"ရောက်နေတယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့နေလည်းတော့ မသိဘူး။ ၂ နာရီလောက်က
ရောက်တာ။ အခုထက်ထိတော့ မပြန်သေးဘူး။ ၂၀၀၇ အသုတ်ဆိုတော့ ဒီငြိမ်းလင်းနဲ့
တွေ့မလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီလိုအသံတော့ ထွက်နေတယ်။"
အခုလို အထူးကိုယ်စားလှယ်မတိုင်ခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်တဲ့အနေနဲ့ အစော
ပိုင်းမှာတုန်းက ထောင်တွင်းမှာကျွေးမွေးတဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင် အခြေ
အနေတချို့ တိုးတက်ခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို တနေရာကနေတနေရာ
ရွှေ့ပြောင်းတာမျိုး၊ ထောင်ဝင်စာတွေ ပိတ်ပင်ထားတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ဒီ
"ထူးခြားမှုကတော့ အဆောင်တွေ ခြိမ်းလိုက်တာပေါ့။ လူတွေ ဘယ်လိုထားမလဲတော့
မသိသေးဘူး။ တွေ့ပေးမယ့်လူပဲ ခွဲထားလိုက်လား၊ ကျန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကတော့
ဟင်းအစိုလေးတွေ နှစ်မျိုးလောက် ပြန်ပေးခိုင်းတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ပေးလို့မရ
တကယ်တော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအပြင် စွပ်စွဲချက်တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ထောင်တွေထဲ
မှာ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အနေနဲ့က ဥပဒေကြောင်းအရ
အကာအကွယ်တွေကလည်း မရှိသလောက် ဖြစ်နေရတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေ၊ အကျဉ်း
သားတွေအတွက် လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ ရှေ့နေတွေကလည်း ပြောနေကြတာပါ။
ဒီအထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်း
ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရရဲ့အမှုကို လိုက်ပါကူညီပေးဖို့ ကြိုးပမ်း
နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေ ဦးညီညီလှိုင်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကြုံနေရ
တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလိုဆိုပါတယ်။
"ဦးဂမ္ဘီရလိုလူတွေက ဘာပုဒ်မနဲ့ အရေးယူထားပြီး ဘာပုဒ်မနဲ့ အဖမ်းခံထားရမှန်း မသိ
ဘဲနဲ့ ထောင်ထဲမှာပဲ ခုခံချေပခွင့် မရဘဲနဲ့ အချုပ်ခံထားရတာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်
ကျနော်တို့ကို မည်သည့်ပုဒ်မနဲ့ အရေးယူထားပြီး မည်ကဲ့သို့ ခုခံရမယ်ဆိုတာ သိသာ
ထင်ရှားအောင် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာပဲ ချုပ်ရက်တွေအကြာကြီး ခုခံချေပ
ခွင့်မရဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ အချုပ်ခံနေရတဲ့အတွက် အများကြီး လူ့အခွင့်အရေး ထိခိုက်
နစ်နာနေပါတယ်ဆိုတာ ပြောသင့်ပါတယ်။ ဒါမျိုး အခြားလူတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။
"ဥပမာ ကျနော်လိုက်တဲ့အမှုထဲက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားထဲက ကိုကျော်ဆန်းဆိုရင်
သူက အေးစေတီဘုရားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် တခြား
အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေနဲ့ ဆုတောင်းကြတယ်။ ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို့
စိတ်ထဲကနေ သူတို့ လွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းတာ။ ဘယ်သူမှလည်း မကြား
နိုင်ဘူး၊ မသိနိုင်ဘူး။ ဒီဟာကိုပဲ ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါကြတော့ ပုဒ်မ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ)
တို့နဲ့ စစ်ဆေးတဲ့အခါကြတော့ ဘုရားဝတ်ပြုနေတဲ့ပုံကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီး ဒါ ပြစ်မှု
"ဒါ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးပဲ။ လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ဆုတောင်းပိုင်ခွင့်
ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးလေးတောင် မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး
ကော်မရှင်က တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အဖြေတခု ထုတ်သင့်
ပါတယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်။"
ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၂,၀၀၀ လောက် ရှိတယ်ဆိုပြီး
စာရင်းပြုစုထားပေမယ့် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာ
မရှိဘူး၊ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုနဲ့ အရေးယူထားတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကာကွယ်ပြောဆိုနေ
တာပါ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးညီညီလှိုင်
"နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အမှန်တကယ် ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ အဖမ်းခံ
ထားရတဲ့လူတွေ အမှန်တကယ်ရှိနေပါတယ် ဆိုတာကိုတော့ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စား
လှယ်ကို သိစေချင်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်၊ အုပ်ချုပ်တဲ့မူကို
မကြိုက်လို့ ပြောကြဆိုကြတဲ့လူတွေ အဖမ်းခံရတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့အတွက် အမှုရင်ဆိုင်
ရတယ်။ ဒါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါ၊ နိုင်ငံရေးပြစ်မှုပါဆိုတာ သိသာထင်ရှားစေချင်
ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေ ဦးညီညီလှိုင်ပါ။
မနေ့တုန်းကလည်း နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ Amnesty
International က လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံရောက်နေခိုက်
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုသလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့
ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပါသေးတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်း
သားတွေကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်
လို့ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ ကတိတွေသာ ပေးနေတာကို ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ လက်ခံနေဖို့